ချစ် ရပါသော ဟန်နီ – Hlataw.com
မရတော့ဘူး ပးတော့ ” ” “ကြိုက်တာ နှစ်ခုစလုံး ” ဂဒူး တစ်ယောက်တည်းမဘဲ မောင်သောင်းကို အသာလက်ယပ်ခေါ်လိုက်သည်။ နှစ်ပင်ရတာကို သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ဝင်စားသူတွေဖြစ်၍ မောင်သောင်းလည်းမဆိုင်းမတွပင် ထိုင်ရာကနေ ချက်ချင်း ငေါက်ကနဲ ထလာသည်။ “ငါ့လီးမတောင်သေးဘူး မိစူး မှုတ်ပေး ” “လာ ကိုသောင်း ဦးဂဒူးဟာကြီးကတော့ မှုတ်စရာတောင်မလိုဘူးထင်တယ် ဟင်း ဟင်း ” တကယ်တမ်းကျတော့ မိစူး နှစ်ယောက်စလုံး၏လီးတွေကို လက်တစ်ဖက်စီကိုင်ပြီးစုပ်ပေးသည်။ မောင်သောင်းလီးထက် ဂဒူးလီးပိုကြီးသည်။ ရှည်လည်းရှည်သည်။ လိုးသည့်နေရာမှာတော့ မောင်သောင်းက ပိုကြာကြာလိုးနိုင်သလို ဂဒူးကအမှုတ်သန်သူဖြစ်၍ နှစိယောက်စလုံးကို သူမဘယ်လိုမှ လက်မလွှတ်နိုင်တာ သေချာလှပါသည်။ လီးကိုတစ်လှည့်စီစုပ်၍ လဒစ်ထိပ်ခေါင်းကိုရော ဂွေးဥနှစ်လုံးကိုပါ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စုပ်ငုံယက်ဆွ၍ ပေးလိုက်ရာ နှစ်ယောက်လုံး လိုးရန်အသင့်ဖြစ်လာသည်။
လီးတောင်လာကြပြီမို့ နှစ်ယောက်သား နေရာယူလိုက်ကြရင်း မောင်သောင်းက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ကာ သူ၏မိုးပေါ်ထောင်၍နေသော လီးပေါ်ကို မိစူးကတက်ခွထိုင်လိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲကို လဒစ်ကြီး ဝင်အောင်သွင်းလိုက်ကာ ဂဒူးက သူမဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်အနောက်ကနေ ဖင်စအိုထဲကို သူ့လီးမရမကထည့်သွင်း၍ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အပေးအယူမျှစွာဖြင့် အဖိအဖော့အတင်းအလျှော့လုပ်ပြီး အဝင်အထွက်မှန်မှန်နှင့် တစ်ယောက်ဝင်တစ်ယောက်ထွက် လိုးပေးလိုက်ကြလေသည်။ မိစူး၏တအင့်အင့်ညည်းသံနှင့်အတူ တဘုတ်ဘုတ်တဇွပ်ဇွပ်လိုးပေးနေသော အသံဗလံများက သူတို့အခန်းကလေး ထဲကနေ အတိုင်းသားထွက်ပေါ်နေပါသည်။ “အင့်အင့် ဟင့် ဆောင့် လိုး လိုးပေး ဦးဂဒူး ဖင်ကွဲအောင်လိုး လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်အောင်လိုးနော် ” “အေးပါ မိစူး ငါလိုးပေးမယ် စ်တ်ချ နင်သာ ဟိုကောင့်လီးကိုဝင်အောင်ထည့်လိုး နင့်စောက်ပတ် ကြပ်စီးမနေဘူးလား ” “ဦး လီးက ပိုကြီးတယ် ရှည်လည်း ဒီလောက်ရှည်လှတာ သိပ်အားရတာပဲ အ အ လိုး လိုးပေးမြန်မြန် ဆောင့်ဆက်တိုက်လိုး … အ ပြီး ပြီး တော့မယ် … အိ အိ အီးအင့် ဟင့်ဟင့် ” “မိစူး ငါနို့စို့ပေးမယ် နင် နည်းနည်းထပ်ကုန်းလိုက် … ကိုဂဒူး လိုးပစေ … ငါ့လီးကို အသာမျှောလိုးပေးထား ငါအောက်ကနေ လီးကို ကော့လိုးပေးမယ် ရလား မိစူး လေး ” “ရ ရတယ် ကို သောင်း အ အ တအား မ မကော့နဲ့ … လီးကနှစ်ချောင်းလုံး ကျွံဝင်နေပီ လျှော့ လျှော့ပါဦး အ အမေ့ သေပါပြီ နော် အီး ဟီးးဟီးးး ” မိစူးတစ်ကိုယ်လုံး ချွေးသံတရွှဲရွှဲဖြစ်နေပြီ။ စောက်ပတ်နှင့်ဖင် တစ်ပြိုင်တည်းအလိုးခံရမှုက သက်သာလှသည်တော့ မဟုတ်ချေ။ မောင်သောင်းလီးက ကြီးသလို ဂဒူးလီးကလည်း ကြီးသလောက် ရှည်သောလီးဖြစ်ရာ မောင်သောင်းလီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲ သွင်းကာ ဖင်တလှိမ့်လှိမ့်လုပ်၍ဆောင့်ရင်း အနောက်ကနေ ဂဒူးလီးကြီးက သူမဖင်ထဲကိုတစ်ဆုံးအထိ ဝင်ရောက်လိုးဆောင့်မှုအား အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့် မျက်စိစုံမှိတ် ကုန်းခံပေးနေရလေသည်။
မောင်သောင်းက မိစူးဖိလိုးသည့်အတိုင်း အောက်ကနေ သူ့လီးကြီးကို ကော့ဆောင့်ပေးသည်။ သူကော့အဆောင့်မှာ သူမစောက်ပတ်ထဲကို လီးထိပ်ကြီးက အဆုံးထိ ဆောင့်ဆောင့်ဝင်ပြီး သားအိမ်ကိုပင် ဒုတ်ဒုတ်ဆိုပြီး ထိတိုက်မိသွားရသည်။ ဂဒူးကလည်း အနောက်ကနေ သူမဖင်စအိုပေါက်ကလေးထဲကို သူ့လဒစ်ထိပ်ပြဲကြီး သွင်းပြီး အကွဲအပြဲလိုးပေးနေပါသည်။ တစ်နာရီလောက်ကြာအောင် လိုးပစ်လိုက်ကြရာ မိစူး သုံးချီတိတိပြီးသွားရလေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်၏ လီးထိပ်များဆီမှလည်း လရည်တွေတဗြစ်ဗြစ်ပန်းထွက်ကာ မိစူးလည်း ရမ္မက်ချင်ခြင်းပြည့်သွားရလေသည်။ “ခဏနားဦး ဆက်တိုက်လိုးရင် မိစူး သေလိမ့်မယ် ” “ပျော်လား မိစူး ဖင်ခံရတာဘယ်လိုလဲ ” “အင်း အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့ အကျင့်ရလာတော့လည်း ခံနိုင်သွားတယ် ဒါပေမယ့် ကိုသောင်းတို့နှစ်ယောက်က လီးတအားကြီးတယ် … အမြဲတမ်း ဒီလိုလိုးရင် မိစူး အသက်တိုဖို့ပဲရှိတယ် …ဟင်းဟင်း ဟင်း ” “ငါမေးတာ နင်ပျော်လား လို့ စောက်ပတ်လိုး ဖင်လိုး ခံရတာကြိုက်လား ” “ကြိုက်တယ် ကြိုက်လို့လည်း ခံတာပေါ့ ဒါနဲ့ မမဟန်နီဖင်ကိုရော မလိုးချင်ဘူးလား ” “ဟားး ဘယ့်နဲ့ပြောပါလိမ့် သူခံချင်အောင် နင်ပြောပေးလို့ရမလား ရရင် ငါ ထိပ်ဆုံးက လိုးပေးမယ် ” မောင်သောင်းကပြောရာ မိစူး သူမစိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။
တစ်ခုရှိတာက သူမရော မမဟန်နီပါ ခွေးကြီးရမ်ဘိုနှင့် မှန်မှန်ကြီးစခန်းသွားနေမှုကိုတော့မူ သူတို့တတွေ ဘယ်နည်းနှင့်မှ သိလို့မဖြစ်နိုင်ပေ။ “မိစူး ပြောပေးမယ်လေ မယုံရင်စောင့်ကြည့်ကြပေါ့ ” “မိစူး ငါတစ်ခုမေးမယ် ” “မေး ဘာမေးမလဲ ” “နင်နဲ့ နင့်မမဟန်နီ တစ်ခါမှစောက်ပတ်မပွတ်ကြဘူးလား မှန်မှန်ပြောနော် ” ဂဒူးက မေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိစူး ခိကနဲ ရယ်လိုက်ပြီး … “ပွတ်တယ် တစ်ခါတစ်လေပေါ့ တစ်ခါတစ်ခါကျရင်လည်း လေးငါးညဆက်သွားတာပဲ ” “ဘယ်အခန်းမှာလဲ အပေါ်ထပ်မှာလား ” “နေဦး အဆင်ပြေရင် ကျွန်မပြောမှာပေါ့ ကဲ တော်ပြီ ရှင်တို့စကားချည်းပဲပြောနေရင် မိစူးပြန်မယ် ” သုံးယောက်သား တစ်ယောက်အရက်သုံးလေးခွက်စီ သောက်ပြီး လုပ်ငန်းပြန်စကြသည်။ မိစူး ပြန်လာချိန်မှာ ည၁၁ နာရီထိုးပြီ။ . အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်တော့ ထမင်းချက်မညွန့်တစ်ယောက် မီးဖိုမှာ သရက်သီးသနပ်အိုးတင်ကာ နှပ်ထားရင်း နဘေးရှိ ခုံတန်းရှည်တစ်လုံးပေါ်မှာ အညောင်းဆန့်ရာက တခူးခူးနှင့်အိပ်မောကျနေတာတွေ့ရသည်။ မညွန့်ထမီစလေးပြေကျနေ၍ ပေါင်တန်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးတစ်ဖက်က မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပေါ်ထွက်နေလေသည်။ မညွန့်လည်း သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် ရောက်ပေမယ့် မပျက်စီးသေးလို့ ဆိုရမည်။ မောင်သောင်းကဲ့သို့ ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်နှင့် အကြောင်းပါပြီး စားဝတ်နေရေးအရ သူဋ္ဌေးအိမ်မှာထမင်းချက်လုပ်နေရပေမယ့် လုံးကြီးပေါက်လှဟုဆိုရမည့် မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ သူမရုပ်ရည်က ပြင်ဆင်လိုက်မည်ဆိုလျှင် ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိမည့် မိန်းမချောမိန်းမခန့် စာရင်းဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ မိစူး သူ့ကို မနှိုးတော့ဘဲ အိုးကို မီးဖိုပေါ်ကနေချကာ လျှပ်စစ်မီးဖိုခလုတ်ကို ပိတ်ပေးလိုက်သည်။
ညနေစာစားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကျန်နေသည့် ဟင်းကျန်ထမင်းကျန်ကိုနယ်ဖတ်ပြီး ညဉ့်လယ်စာအနေနှင့် အဆာပြေရုံ စားသောက်လိုက်သည်။ မညွန့်က စည်းစနစ်ကြီးသူပီပီ မနက်ဖြန်အတွက်ကို လိုအပ်တာမရှိအောင် စီမံချက်ပြုတ်ပြီး သူ့နေရာနှင့်သူ စနစ်တကျဖုံးအုပ်ထားတာ တွေ့ရသည်။ မနက်ဖြန် အားလပ်ခွင့်ရဦးတော့မည်။ မမဟန်နီ ခရီးထွက်ပြီဆိုလျှင် သူမရယ် ရမ်ဘိုရယ်သာ အိမ်ကြီးမှာကျန်ခဲ့ကြမည်။ မညွန့်လည်း လင်ဖြစ်သူအနားကပ်ပြီး တစ်နေကုန် ကဲကြသဲကြမည်မှာဧကန်မို့ သူမအနေနှင့် အခွင့်ကောင်းကို သေချာပေါက် ရရှိမည်လည်းဖြစ်ပေသည်။ အပေါ်ထပ်က အခြေအနေသိချင်၍ ခြေသံမကြားအောင် တိတ်တိတ်ကလေးလှမ်းတက်လာခဲ့သည်။ မမဟန်နီ အခန်းတံခါးကစေ့ထားသည်။ ရမ်ဘိုရှိမည်တော့မဟုတ်ချေ။ တစ်နေ့က သူမမိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ ခွေးမ တစ်နှစ်နှစ်လသမီးလေး ဟိလာ (ရာသီလာ)၍ မမဟန်နီထံအကူအညီတောင်းရာမှ ရမ်ဘိုအား လွှတ်ပေးခဲ့ရသည်။ ပထမအကြိမ် ပြီး၍ ဒုတိယဟိဖြစ်ကာ ကာလအားဖြင့် ၁၁ ရက်ရှိပြီမို့ ရက်သင့်ပြီး (အစ်မတွေ ရွပိုးထိုးချိန်မှာ ၁၂ရက် ၁၃ ရက်အထိရှိပြီး မျိုးစပ်ဖို့သင့်တော်သောရက်မှာ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဖြစ်သည်။ စကားချပ်) လှောင်အိမ်ထဲထည့်ထားခဲ့ရကာ ရမ်ဘိုနှင့်မပေးစားချင်ဘဲ ပေးစားခဲ့ရပြီး အားရှိသော ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာများ ကျွေးမွေး၍ သူ့ကို အနားပေးထားရလေသည်။ ရမ်ဘိုက သူမတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတွက်သာမက ခွေးရှင်တွေအတွက်လည်း မျက်နှာပန်း အလွန်ပွင့်လှသည့် အောင်မြင်သော သားစပ်ခွေးထီးတစ်ကောင်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ မမဟန်နီ ကုတင်ထက်မှာ တရှူးရှူးနှင့်အိပ်ပျော်နေပုံရသည်။
ညဝတ်ဂါဝန်လေးမှာ ပေါင်ရင်းအထိ လန်တက်နေပြီး အမွှေးဘုတ်သိုက်နှင့်ပိပိကလေးပါ အတိုင်းသားပေါ်ထွက်နေတာ တွေ့ရသည်။ တံခါးကို အသံမကြားအောင်ဖွင့်လိုက်ပေမယ့် ကလစ်ကနဲ မြည်သံက မမကို အမှတ်မထင် လန့်နိုးသွားစေသည်။ မမဟန်နီခေါင်းထောင်ထလာပြီး … “လာစမ်း မိစူး ငါ စောင့်နေတာ ဘယ်ကတည်းက မှတ်လဲ ” မိစူး သူမအနားလျှောက်လာပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ပါသည်။ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်၏ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုက ပူးပူးကပ်ကပ်ဖြစ်သွားကြလေသည်။ မမဟန်နီ တစ်ရေးနိုးချိန်ကျမှ ဇွတ်ကြမ်းနေသည်။ “အိုးးး ဘာကြီးလဲ မမ ” “ငါ နင့်အတွက် သီးသန့် ရွေးယူလာတာ လေ ဘယ့်နှယ်လဲ မိစူး ” “အဟင့် ဟင့် အဲ အဲဒါကြီး နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ဖြစ်ပါ့မလား မမ ရဲ့” “နင် မဖြစ်စရာ ဘာရှိလဲ ရမ်ဘိုနဲ့တောင် အချိန်မှန် လိုးသေးတဲ့ဥစ္စာ ဟင်းဟင်း ဟင်း ” တကယ်တော့ ဒီဟာကြီး အသုံးပြုပြီး သူမနှင့် မညွန့် ညဉ့်ဦးယံတစ်ချိန်လုံး စခန်းသွားခဲ့ကြပြီးပြီ။ ဟန်နီမောမောနှင့် တစ်ရေးတစ်မော အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ လင်ဖြစ်သူဖုန်းဆက်လာ၍ ပဲခူးရှိ ပွဲရုံလုပ်ငန်းကို သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရင်းး အပြန်မှာ သူမ၏ ကျောင်းနေဖက်ဖြစ်သော မိတ်ဆွေရင်းတစ်ယောက်၏ မောင်ဖြစ်သူ လက်ထပ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝိုင်းကူပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်၍ တစ်ညအိပ်နှစ်ညအိပ် ပဲခူးမှာ သောင်တင်ဦးမည်ဖြစ်သည်။ မိစူးကိုလည်း အိမ်အတွက်မှာကြားစရာရှိတာတွေကို အသေအချာ ပြောဆိုမှာကြားရင်း နှစ်ယောက်သားအချစ်ပလူးနေကြကာ ညနေကတည်းက သူမဆောင်ထားခဲ့သည့် ယောက်ျားလိင်တန်ဆာ အတုချောင်းကြီးက အသုံးဝင်နေခဲ့သည်။
တစ်ယောက်တစ်လှည့် အပြန်အလှန် အသုံးပြုပြီး တစ်ညတာပျော်ပါးမှုဖွေရှာရင်း မနက်လေးနာရီလောက်မှ နှစ်ယောက်သားလက်ပန်းကျကာ ဖလက်ပြသွားကြလေသည်။ နှစ်ယောက်အချစ် အိမ်အတွက်ဈေးဝယ်ပြီးအပြန်မှာ မိစူးတစ်ယောက် မသင်္ကာစရာ တစ်စုံတစ်ခုကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ ခါတိုင်း ဈေးသွားလျှင် မညွန့်နှင့်သူမ တစ်လှည့်စီ သွားတတ်ပေမယ့် ခုရက်ပိုင်း မညွန့်က သူမ နေထိုင်မကောင်းလို့ ဆိုပြီး မိစူးကိုသာ ဝယ်ခြမ်းရမည့် ဟင်းရံအမည်ပြောပြီး ဈေးလွှတ်လေ့ရှိသည်။ မိစူးက အပြင်ထွက်လျှင်ဘယ်တော့မှ ဖြောင့်ဖြောင့်မပြန်တတ်။ ဟိုဝင်ဒီဝင် အသိသူငယ်ချင်းတွေနှင့် တောင်တောင်အီအီ စကားပြောဆို၍ တစ်ခုခုစားသောက်ပြီးမှ အေးအေးဆေးဆေး အိမ်ပြန်လာလေ့ရှိသည်။ မမဟန်နီကိုလည်း ကြောက်ရမည့်သူမဟုတ်၍ သူမအနေနှင့် ထင်ရာစိုင်းနေနိုင်သည်။ ဒီနေ့လည်း အပြင်မှာ မေသူနှင့်တွေ့၍ သူခေါ်တာနှင့်နှစ်ယောက်အတူ မုန့်ဟင်းခါးဝင်စားပြီး မညွန့်အတွက်ပါ ပဲသွေးနှင့်တစ်ပွဲ ပါဆယ်မှာယူလိုက်ကာ မေသူကိုနှုတ်ဆက်၍ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့ …သူမအိပ်ခန်းထဲမှ အသံဗလံများကြားရ၍ ခြေသံမကြားအောင် တိတ်တိတ်ကလေးသွားပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်မိသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ အခန်းတွင်းရှိမြင်ကွင်းကို မြင်တွေ့လိုက်ရ၍ မိစူးလည်း အတော်ကလေးအံ့သြသွားမိလေသည်။ အခန်းထဲမှာ သူမအိပ်သောကုတင်ထက်မှာ အဝတ်အစားမလုံမလဲနှင့် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကာ အချစ်နယ်လွန်၍ နေကြသော မာလီဂဒူးနှင့်မညွန့်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပက်ပင်းမြင်လိုက်ရ၍ အံ့အားသင့်သွားရလေသည်။ မညွန့်က ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကားယားလဲလျောင်းလျက်ရှိပြီး ဂဒူးက သူမအပေါ်စီးကနေ မညွန့်ပေါင်နှစ်ဖက်ကို သူ့ပုခုံးထက်မှာ တင်ထမ်း၍ အပီအပြင်လိုးနေလေသည်။ “အ အ အိ အိ အင့် ကို ကို ဂဒူး အ ဖြေးဖြေး လီးကြီးက ရှည်လွန်းလိုက်တာ သားအိမ်ဆောင့်နေပြီ နည်းနည်းလျှော့ လျှော့ပါ ဦး အား အင့် အင့် ” မညွန့် ညည်းသံကြီးက ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်။
သူမညည်းညူနေသည့်ကြားကပင် ဂဒူးလီးကြီးက အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်း ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေလေရာ ဇွပ်ဖတ် ဇွတ်ဖတ် ဘုတ်ဗွပ်ဆိုသောအသံများက အားရစရာပင် ထွက်ပေါ်နေပေတော့သည်။ မိစူးပြုံးလိုက်ပြီး ပစ္စည်းတွေ နေရာချလိုက်ကာ အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး ခပ်တည်တည်နှင့်ဝင်ချသွားလိုက်သည်။ “အို့ အင့် အင့် ဟင် … မိ … မိ စူး … ငါ ငါ အို … ” “ဘာမှ အို မနေနဲ့ အစ်မကြီး ရဲ့ ဟင်း … ကိုသောင်းပြန်လာရင် ဒီကိစ္စအသေအချာရှင်းရမှာပဲ ဟင်း ဟင်း ” “ဟယ် မ မလုပ်ပါနဲ့ မိစူး ငါ ငါ ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ ဟယ် တ တကယ် ပြောတာ ငါတောင်းပန်ပါတယ် ” “အိုးး ကျွန်မက ဒီလိုနေမယ် ထင်လို့လား ဟင်း သူများအိပ်ယာပေါ်မှာလည်း လိုးချင်တိုင်း လိုးနေကြသေး သူတို့ကများ … ” “မိစူး မိစူး နင် နင် ဒီ ဒီလို မ မလုပ်ပါနဲ့ အ အမေ့ သေချင်းဆိုးကြီး အသေလိုးရသလား ဟင့် အိအင့်အင့် ” မညွန့် စကားတောင်ဖြောင့်ဖြောင့် မပြောနိုင်ရှာပေ။ ဂဒူးက သူမပေါင်နှစ်ဖက်ဖြဲကားပြီး အသေလိုးချနေကာ အရှိန်ကောင်းနေတုန်းဖြစ်သည်။ လီးကို ကော့၍ကော့၍ တစ်ချက်ချင်းလိုးနေရာ သူမစောက်ပတ်တစ်ခုလုံးပင် ပြဲပြဲလန်မလိုတောင်ထင်ရပေသည်။ မညွန့် မျက်နှာ အကြီးအကျယ် ပျက်နေစဉ်မှာပင် မိစူးလည်း သူမကိုယ်ပေါ်မှ အင်္ကျ ီနှင့်ထမီကို ကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ် ချွတ်ပုံချလိုက်ရာက သူတို့နှစ်ယောက်ရှိရာ ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်သည်။ “ဦးဂဒူး မြန်မြန်လိုး မိစူး ဒီအတိုင်း ကြည့်မနေနိုင်ဘူး ” “အေးပါ ငါ ပြီးတော့မှာပါ …နင်သာ အသင့်စောင့်နေ ” မိစူး မညွန့်မျက်နှာအနားကပ်၍ သူမနှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။ . မညွန့်တအံ့တသြဖြစ်မိပေမယ့် ကြောင်အမ်းအမ်းတော့ဖြစ်မနေပါ။ သူမအနေနှင့် မိစူးနှင့်လင်တော်မောင် မောင်သောင်းရော မာလီဂဒူးနှင့်ပါ စခန်းသွားဖူးသည့်အဖြစ်ကို သူမကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှု ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ မညွန့် မိစူးကို ပြန်နမ်းသည်။ မိစူးလက်က သူမနို့အုံကြီးနှစ်မြွှာဆီ ရောက်ရှိသွားပြီး အပီကိုင်ကာ နယ်ပေးလိုက်သည်။ မညွန့်ကလည်း သူမကိုပြန်ဖက်၍ နှစ်ယောက်သား နို့ကိုင်ဖင်ကိုင် ဟိုကိုင်ဒီနယ် ပြုနေကြရာ ဂဒူးလည်း အားတက်လာပြီး မညွန့်ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲဖြဲ၍ အဆက်မပြတ် တဘုတ်ဘုတ် တဘတ်ဘတ်နှင့် ဇယ်ဆက်သလို လိုးဆောင့်ချလေတော့ရာ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ပိုတက်ပိုမြန်လာခဲ့ပြီး သူ့ခါးကို တဆတ်ဆတ်ကော့ထိုး၍ လီးထိပ်မှ ပျစ်ချွဲချွဲလရည်များကို မညွန့်စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တဗြွတ်ဗြွတ်ပင် ရေကုန်ရေခမ်း ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်လေတော့၏။ မိစူးနှင့်မညွန့် ဂဒူးလီးကို နှစ်ယောက်သားအလုအယက်နမ်းစုပ်ကာ လရည်နှင့်စောက်ရည်များပြောင်စင်အောင် ယက်ပေးလိုက်ကြသည်။
ဂွေးဥနှစ်လုံးပါမကျန်အောင် ယက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဂဒူးလီးကြီးမှာ အမှုတ်သန်သည့် မိန်းမသားနှစ်ယောက်၏ တံတွေးရည်များဖြင့် တောက်ပြောင်စိုလက်ကာ တွဲလောင်းကြီးကျလျက် ရှိနေလေတော့သည်။ မညွန့်စောက်ပတ်ကို တစ်ချီလိုးပြီးသွားသော သူ့လဒစ်ထိပ်ခေါင်းကြီးမှာ အပြူးသားဖြစ်နေပေသည်။ “မိစူး လာ နင့်စောက်ပတ် ငါမှုတ်ပေးမယ် ” ဂဒူးပြောလိုက်ရာ … “ဟင့်အင်း မမှုတ်နဲ့ဦး … အစ်မညွန့်စောက်ပတ် အရင်မှုတ်ပေးလိုက်” ဂဒူးလည်း သူမအမိန့်ကို နာခံပြီး မညွန့်ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြဲ၍ ပေါင်ကြားထဲရှိစောက်ပတ်ကို အားပါးတရမှုတ်ပေးလိုက်သည်။ မညွန့်လည်း သူမခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကျကျနနဖြဲကား၍ ဂဒူးက သူမစောက်ပတ်တစ်ဝိုက်ကို အားရပါးရ လျှာနှင့်ယက် ပါးစပ်နှင့်စုပ်နမ်းပေးတာကို ဖျပ်ဖျပ်လူးမျှ ကော့ခံနေရင်းက မိစူးကိုလက်ယပ်ခေါ်ပြီး သူမမျက်နှာပေါ်မှာ မိစူးကို ထိုင်ချစေလိုက်ပါသည်။ မိစူး၏ ပြဲအာအာကလေး ဖြစ်နေသော စောက်ပတ်ကို အောက်ကနေ သူမ လျှာသွင်းပြီး အပီအပြင် နမ်းလိုက်စုပ်လိုက်နှင့်ပြန်လည် ယက်သပ် ဆွနှူးပေးလိုက်လေသည်။ သုံးယောက်သား အပေးအယူမျှကာ အတော်ကလေးဟန်ကျနေကြပြီး မညွန့်ရောမိစူးပါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆွလိုက်နှူးလိုက် ဂဒူးကဂျာပေးလိုက်နှင့်ရမ္မက်အမှောင်ဖုံးကာ စောက်ပတ်တရွရွဖြစ်ပြီး အရှက်ကုန်လာခဲ့ရလေပြီ။ မိစူးရောမညွန့်ပါ စောက်ရည်တရွှဲရွှဲဖြစ်လာပြီး အနေရခက်လာကြသည်။ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော ဂဒူးလီးကို တစ်ယောက်ကစုပ်လိုက် ကျန်တစ်ယောက်က စောက်ပတ်အယက်ခံလိုက်နှင့် နှစ်ချီစီလောက် စောက်ရည်ပန်းထွက်ကာ ကိစ္စပြီးသွားကြသည်။ ဂဒူး ပထမစလိုးသူက မိစူးဖြစ်သည်။
မိစူးကို သူလိုး၍မဝသေးပါ။ သူမကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်ကနေ ပြူးထွက်နေသော သူမစောက်ပတ်ကို ကုန်းလိုးသည်။ စောက်ပတ်လိုးပြီး နောက်တစ်ချီ ဖင်လိုးသည်။ မညွန့်လည်း မိစူးကိုယ်တိုင်ဖင်ခံမှုကိုမြင်ရသဖြင့် ကာမစိတ်များ တအားထကြွလာလေသည်။ သူမအလှည့်မှာ ဂဒူးဖင်လိုးခွင့်တောင်းရာ အသာတကြည်ပင် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မောင်သောင်း တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ဖင်လိုးမှုကိုခံဖူးပြီး ဖင်ထဲ လီးသွင်းကျင့်ရှိနေ၍လည်း သူမအဖို့ ယခုကဲ့သို့ ဂဒူးအလိုကို လွယ်လွယ်နှင့်လိုက်လျော ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မမဟန်နီနှင့်အတူ မညွန့်ယောက်ျားဖြစ်သော ဒရိုင်ဘာမောင်သောင်းပါ တစ်ပါတည်း လိုက်ပါသွားခဲ့တာကြောင့် သူတို့သုံးယောက် ဘာအနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိဘဲ အိမ်မှာပဲတစ်နေကုန်နေရင်း ဂဒူးက သူမတို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်စီ ပတ်လည်ရိုက်ကာ လိုးပြီးရင်းလိုးနေလေတော့၏။ စောက်ပတ်ရော ဖင်ပါ လရည်အလိမ်းလိမ်း ပေပွနေအောင်အလိုးခံပြီး နှစ်ယောက်သား ကောင်းစွာ အနားယူလိုက်ကြပါသည်။ ညနေဖက် ရမ်ဘိုကိုအစာကျွေးပြီး မိစူး သူ့ကို အပေါ်ထပ်ရှိ မမဟန်နီအိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွင်းလာသည်။ . “မိစူး ဘယ်ရောက်သွားလဲ အညွန့် ” “ခွေးစာကျွေးနေတယ်ထင်တယ် ဘာလုပ်ဖို့လဲ သူ့ကိုခေါ်ချင်လို့လား” ဂဒူးရောက်လာပြီး မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၍ မညွန့်လည်း မရေမရာဖြေလိုက်ရသည်။
ဂဒူး သူမကို အိပ်ခန်းထဲအထိ ဆွဲခေါ်လာသည်။ နေ့ခင်းက သူမတို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ချိန်လုံး လိုးခဲ့တာတောင် ဂဒူးက အားမရနိုင်သေး။ သူမကို တစ်ချီ အရင်ဆွဲဖို့ပြင်နေသည်။ “မခေါ်နဲ့ဦး နင့်နဲ့ငါ အရင်ဆော်ကြမယ် ပြီးမှ သူ့ကို လိုက်ရှာတာပေါ့ ဧကန္တ ခွေးနဲ့လိုးနေတာလား မသိဘူး ” ဂဒူးပြောလိုက်ရာ မညွန့်က သူ့ရင်ဘတ်ကို ဘုန်းကနဲထုလိုက်ပြီး … “ရှင်ကလဲ ကလေးကို မဟုတ်ကဟုတ်က ပြောတော့မယ် လိုးစရာလား လိုးချင်းလိုး ရှင်နဲ့မောင်သောင်းပဲ ဖင်နဲ့စောက်ပတ်လိုးကြမှာ ” “ဟင်း ဟင်း ကလေး မဟုတ်ဘူး အညွန့်ရဲ့ နင်မယုံရင် စောင့်သာကြည့် ” ဂဒူးပြောပြီး လုပ်ငန်းစလိုက်သည်။ မညွန့်ကိုယ်ပေါ်ကအဝတ်တွေ ကြမ်းပြင်ထက်သို့ လျှောကနဲ ကျွတ်ပုံကျ သွားခဲ့လေပြီ။ ရမ်ဘို့ဖူးစာ မညွန့်နှင့်ဂဒူး အပေါ်ထပ်ရှိ ဟန်နီ့ အိပ်ခန်းဖက်ဆီ တက်လာသည်နှင့် အသံဗလံများကို စကြားရလေပြီ။ ဂဒူး သူမကို လှည့်ကြည့်ပြီး ရှူး တိုးတိုး ဟု ပါးစပ်မှာ လက်ညှိုးကပ်၍ အချက်ပေးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သား အိပ်ခန်းဝအထိ လျှောက်လာကာ တံခါးကို အသာဆွဲဟ၍ ချောင်းကြည့်လိုက်ကြပါသည်။ “အိ အင့် အအ ရ မ် ရမ်ဘို ဖြေး ဖြေး လိုး စမ်း အ အကျွတ် ကျွတ် နာတယ် ငါလိုးကလေးရဲ့ နင့်လဒစ်ကြီးနဲ့ လိုးရင် … သေပြီပေါ့ အ အ ဆောင့်ဆောင့်ကွာ ဒီလောက်ဖြစ်လှတာ လိုး လိုးစမ်း စောက်ပတ်ကွဲအောင်လိုး ဖင်တော့မလိုးနဲ့ ကြားလား ” ရမ်ဘို သူမ၏ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်ထားသော ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက် အနောက်ကနေ သူမစောက်ပတ်ကို ခွေးလိုးလိုးလျက်ရှိသည်။ မညွန့် ကိုယ့်မျက်စိတောင်ကိုယ်မယုံနိုင်ဘဲ ဖြစ်မိလေသည်။ “ဟယ် အံ့ပါ့တော် မိစူးတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီ ” “ခွေးလီးက ကြီးတယ် နင်ရော အလိုးမခံချင်ဘူးလား ” “အိုးး မခံပါဘူး ကြက်သီးထချင်စရာကြီး … ဟီး ဟီးးး ” “နင် ခွေးလျှာနဲ့ယက်တာ ခံချင်မှာပေါ့ လာ အထဲဝင်မယ် ” “ဖြစ် ဖြစ်မလား ကောင်မလေး ရှက်နေမှာပေါ့ ” “သူမရှက်လို့ ခွေးလိုး လိုးတာ မမြင်ဘူးလား ” ဂဒူး သူမလက်ကို ဆွဲကာ အခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။
မိစူးက ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ။ သူတို့ဝင်လာတာကိုတောင် သတိမထားမိနိုင်တော့။ ဒီအချိန် အခန်းထဲမှာ အချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံး လာဖောက်ခွဲလျှင်တောင်မှ ထွက်ပြေးဖို့ရာ စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်တော့ပါ။ သူမဖင်နှစ်ဖက်ကို ဖင်ဘူးတောင်းထောင်မတတ် ခွက်နေအောင် ကုန်းထောင်ပေးထားရင်း ခွေးကြီးရမ်ဘို၏ သဲကြီးမဲကြီး တဇပ်ဇပ်လိုးဆောင့်မှုကို အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့်ကုန်းခံနေပေသည်။ သူမစောက်ရည်လည်း အထွက်ကြမ်းနေပြီး နှစ်ချီသုံးချီမက လေးချီလောက်အထိ စောက်ရည်များပန်းထွက်ကာ ဆက်တိုက်ပြီး နေခဲ့ရပြီ။ စောက်ရည်တွေက သူမပေါင်ခြံတစ်ဝိုက်မှာသာမက တကောင့်ခွက်နားအထိ ရောက်အောင် ယိုစီးးကျနေခဲ့ရသည်။ ဂဒူးလည်း မညွန့် အင်္ကျ ီနှင့်ထမီကို ဆွဲချွတ်ပြီး သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို စိတ်ကြိုက်နယ်၍နေပြီ။ မိစူးနှင့်ခွေးကြီးလိုးတာ ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်ပြီး သူ့လီးကြီး အပြတ်ပင်တောင်လာရသည်။ မညွန့်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ အလိုလိုနေရင်း ဟော့ချင်လာသည်။ ဂဒူးလချောင်းကြီးကို လက်နောက်ပြန်ကိုင်ပြီး ဂွင်းရိုက်ပေးနေမိကာ နှစ်ယောက်သားအလုပ်ဖြစ်နေကြလေသည်။ မိစူး သတိဝင်လာကာ ခွေးကြီးအား လီးချွတ်စေလိုက်ရာက ကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်၍ ပက်လက် ဒူးထောင်ပေါင်ကားလုပ်ရင်း ရမ်ဘို၏ဦးခေါင်းကို သူမပေါင်ကြားထဲသို့ ဆွဲထည့်ပေးလိုက်လေသည်။
ရမ်ဘိုလည်း စောစောက သူလိုးပြီးသွားသည့် မိစူးစောက်ပတ်ကို အမြတ်တနိုးပင် သူ့လျှာပြားကြီးဖြင့် တပြပ်ပြပ် ယက်သပ်ပေးနေလေပြီ။ “ဟင် ဦး ဦး ဂဒူး … မ မ … ညွန့် … အို … ” “မိ မိစူး အ အ … နင် နင် စိတ် စိတ်မဆိုး နဲ့ နော် … ဟင့် ဟင့် အ အင့် အင်းးး ” မိစူး အခြေအနေမှန်ကိုသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ်ကနေ ဆင်းချလာပြီး ရမ်ဘိုနားနားကပ်၍ တစ်စုံတစ်ခုကို ကပ်ပြောလိုက်လေသည်။ သည့်နောက် … “လာ မမ ဒီပေါ်လာကြ … ဘာလဲ တစ်ယောက်တည်း အပိုင်စီးမလို့လား ဟင်းဟင်း ဟင်း ” “မ မဟုတ်ပါဘူး မိစူးရယ် ” လီးတန်းလန်းနှင့် ဖြစ်သည်။ ဂဒူး လီးကို ပြန်ချွတ်လိုက်ပြီး မိန်းမနှစ်ယောက်အကြားဝင်၍ ပုခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဖက်ကာ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ပါသည်။ မိစူး မညွန့် စောက်ပတ်ကို မှုတ်ပေးသည်။ လက်နှင့်လည်း အပြတ်နှိုက်ဆွပေးသည်။ မညွန့် စောက်ရည်တွေ တောက်တောက်ယိုစီးကျခဲ့ရပေပြီ။ “ကျွန်မ အလှည့်နော် မ မညွန့် ” “အင်း ဟိုဖက်လှည့် မိစူး ” မိစူး ဂဒူးလီးကို လရည်ထွက်အောင်စုပ်ရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကျကျနနဖြဲကား၍ မညွန့် စောက်ပတ်ယက်ပေးတာကို ကော့ခံပေးနေသည်။ ” မမ မမ … ” ဆိုပြီး သူမခေါင်းကို ဖိနှိမ်ချရင်း တင်ပါးနှစ်ဖက်ကော့ပျံကာဖြင့် ဆန့်ငင်ထွန့်လူးနေချိန်မှာပင် ရမ်ဘိုလည်း မိစူးအရိပ်ပြသလို အကောင်မြင်သည့် ခွေးလိမ္မာကြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မညွန့်စောက်ပတ်ကို သူမဖင်သားအိအိနှစ်ဖက် အနောက်ကနေ၍ လျှာပြားကြီးနှင့်တပြပ်ပြပ်ယက်နမ်း၍နေတော့သည်။
. မညွန့် ချက်ကောင်းမိ၍ လန့်ဖျပ်အော်လိုက်မိသည်။ “အို အု အူးး အူးး… ဝု အု အု … အူးးးး … အူးးး ဝူးးး … ” ရမ်ဘိုကလည်း သူ့သခင်မနှစ်ယောက်အပေါ် သူပြုလုပ်နေကျအတိုင်းပင် ဟန်မပျက် ပါးစပ်မှ တဟဲဟဲ အသံပြုလျက် မညွန့်၏တဏှာရည်ရွှဲနစ်နေပြီဖြစ်သော စောက်ဖုတ်ပြင်ကြီးကို လျှာနှင့်စိမ်ပြေနပြေ ယက်ပေးနေပါသည်။ မိစူးလည်း သူမကိုအလစ်မပေးဘဲ ခေါင်းကို ဖျစ်ဆွဲ၍ ဖိနှိမ်ထားလေရာ ရမ်ဘိုကြီး စိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားခွင့်ရပြီး မညွန့်၏စောက်ပတ်နှင့်ဖင်ပေါက်ကို အငမ်းမရ ယက်ပေးနေရုံသာမကဘဲ အနောက်ကပါတက်ခွပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲကို သူ့လီးမဝင်ဝင်အောင် မရမကထည့်သွင်း၍ လိုးဖို့ကြိုးစားနေပေပြီ။ ရမ်ဘို့လီးတစ်ချောင်းလုံး မညွန့်၏လီးအဝင်လမ်းပွင့်ပြီးဖြစ်သော စောက်ခေါင်းကလေးထဲသို့ လျှောကနဲ ထိုးဆောင့်တိုးဝင်သွားရကာ လဒစ်ဘုလုံးတစ်ခုလုံးပင် သူမစောက်ဖုတ်ထဲကို မထင်မှတ်ဘဲ တစ်ဆို့ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ရမ်ဘို ဇပ်ဇပ်ဇပ်ဇပ်နှင့် ဖင်ကို စက်သေနတ်ပစ်သလို အဆက်မပြတ် ညှောင့်ဆောင့်၍နေသည်။ သည်အဖြစ်ကို မိစူးရော ဂဒူးပါ သိမြင်နေရပြီး နှစ်ထောင်းအားရလည်း ရှိကြပေသည်။ မိစူး သူမကိုယ်ကို အောက်ဖက်သို့ အနည်းငယ်လျှောဆင်းပြီး မညွန့်ခါးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖက်တွယ်ကာ အနမ်းပေးရင်း သူမနို့အုံအိအိနှစ်လုံးကို ဖျစ်လှိမ့်နယ်၍ နို့သီးကလေးကို ကလိကစားပေးနေသည်။
မညွန့်တစ်ယောက် ယခုလိုမထင်မှတ်ဘဲ ခွေးအလိုးခံရပြီး တစ်ခါမှမခံစားဖူးသော အရသာကို စိတ်ထဲက သာယာိသလိုဖြစ်လာရသည်။ နှုတ်မှလည်း အိုးအိုးအင့်အင့်မြည်တမ်းကာ ဖင်ကြီးတလှိမ့်လှိမ့်နှင့် ရမ်ဘို၏ညှောင့်လိုးခြင်းကို ကော့ခံပေးလာတာ တွေ့ရလေသည်။ ဖီလ်တက်လာပုံရသည်။ ဒီအချိန်မှာ ဂဒူးက မိစူးကို အသာမျက်ရိပ်ပြရင်း သူမကို နဘးအသာဖယ်ခိုင်းလိုက်ရာက မညွန့်ပါးစပ်ရှေ့မှာ သူ့လီးကို တေ့လိုက်ကာ လီးစုပ်ခိုင်းလိုက်ပြန်ပါသည်။ မညွန့် ဘယ်လိုမှ မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပါ။ ငြင်းဆန်ဖို့ရန် စွမ်းအင်တွေပင် ကုန်ခမ်းသလိုကြီးဖြစ်ကာ တစ်ဖက်က ခွေးအလိုးခံ၍ တစ်ဖက်ကလည်း ဂဒူးလီးအားစုပ်ရင်း မိစူး၏ဖင်သားရင်သားများကို ဖျစ်လှိမ့်ချေနယ်ကိုင်ပေးနေမှုအား တစ်ယေညက်တည်း အံကြိတ်တင်းခံရင်း့ဖင့် သူမစောက်ပတ်က စောက်ရည်တွေ အလိုလိုပင် စီးယိုပန်းထွက်လာသည့်အခြေကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရလေသည်။ “မမ အဆင်ပြေလား ဟင် ” “ပြေ ပြေပါတယ် ” “ဒါဖြင့် မိစူးနဲ့မမ နေရာချိန်းလိုက်ရအောင် ရမ်ဘိုက တအားဏှာကြီးတာ …သူမပြီးမချင်းတစ်နေကုန် ဆက်လိုး နေဦးမှာ … မမ ခွေးလိုးခံကျင့်မရှိသေးတော့ ဒီလောက်နဲ့တော်ပြီ … ဦးဂဒူးလည်း လီးတောင်နေတာကြာပြီ ဆိုတော့ မမ နည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်ဦး မမလိုးပြီးမှ ကျွန်မလိုးမယ် ” ခွေးလိုးမှုကို မိစူး ဆက်လက်တာဝန်ယူလိုက်သည်။ မညွန့်နှင့်ဂဒူး တစ်ချီထပ်လိုးချိန်မှာ မိစူးလာ်း သူ့ခွေးနှင့်သူ စောက်ပတ်အယက်ခံရင်း ဖီလင်တွေစွတ်တက်လာကာ ခွေးလီးကို သူမကိုယ်တိုင် ကုန်းး၍ အလိုးခံပေး နေပေတော့သည်။ မညွန့်နှင့်ဂဒူး တစ်ချီလိုးပြီးတော့ ဂဒူးလည်း အနည်းငယ်ပန်းသွားပုံရတာမို့ ခေတ္တခဏအနားယူစေလိုက်ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် စစ်စတီနိုင်းလုပ်ကာ စောက်ပတ်နမ်းကြယက်ကြ မှုတ်ကြ အပြန်အလှန် လက်နှင့်ထိုးနှိုက်ဆောင့်ကြနှင့် အလုပ်များရင်း နောက်ထပ်နှစ်ချီစီ ထပ်ပြီးသွားသည်။
“ကဲ မမရေ ပြန်စလိုက်ကြစို့ ” . မိစူး အချက်ပြလိုက်တာ့ ခွေးကြီးရမ်ဘိုလည်း အမြီးတနှံ့နှံ့နှင့်နေပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်စီ တိုးကပ်လာကာ ပက်လက်လှန်၍ကော့ဖြဲပေးထားကြသော အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်၏စောက်ပတ်များဆီကို ခေါင်းတိုးဝင်၍ တစ်ယောက်ကို တစ်လှည့်စီ လျှာနှင့်တပြပ်ပြပ် လိုက်လံယက်သပ် ဆွနှူးပေးနေပေတော့၏။ မိစူး ပြီးတော့ မညွန့် … မညွန့်အလှည့်ကျတော့ သူ ယခုမှတွေ့ဖူးသည့် စောက်ပတ်အသစ်စက်စက် ပေမို့လားမသိ။ ရမ်ဘို စောက်ပတ်ကိုယက်လိုက် ဖင်ပေါက်ထဲကို လျှာနှင့်ထိုးထိုးကလော်ပြီး အပီအပြင်အရသာယူ၍ စိတ်တိုင်းကျ ယက်ပေးလိုက်ရာ မညွန့်လည်း တအီးအီးတအဲအဲနှင့်ဖြစ်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကော့ပျံလာရလျက် နောက်ဆုံး ရမ်ဘို၏ နောက်တစ်ကြိမ် တက်လိုးခြင်းကို ခံရပြန်လေတော့၏။ သူ အငမ်းမရပင် လိုးသည်။ ဇယ်ဆက်သလို မနားစတမ်း ကျုံးလိုးကျုံးဆောင့်ခြင်းဖြစ်လေရာ မညွန့် လေးချီလောက်အထိ ပြီးသွားရသည်။ ခွေးကြီး သူမကိုလက်မလွှတ်မချင်း သူမကိုယ်တိုင်လည်း မငြီးမငြူပင် ကုန်းလိုက်ကော့လိုက် ဆက်တိုက်ပင် အလိုးခံနေတာတွေ့ရလေသည်။ ဂဒူးက မိစူးစောက်ပတ်ကို ခွေးကြီးနှင့်အပြိုင်ကုန်းယက်ပေးလာပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် စလိုးသည်။ တစ်နာရီလောက်လိုးပြီး တစ်ချီပြီးရာ မိစူးကို သူ့အပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်ရပြီး သူမစိတ်တိုင်းးကျ ထပ်မံ၍ အားပါးတရ စိတ်ရှိသဘောရှိ လိုးစေလိုက်ပါသည်။
မိစူးလည်း ဂဒူးအပေါ်ကနေ ဖင်ကိုတလှိမ့်လှိမ့်ကြိတ်ကာ စကောဝိုင်း မွှေ့လိုးပစ်လိုက်လေသည်။ မိစူး လိုးပြီး ခဏနားချိန်အထိ ရမ်ဘိုလိုး၍မပြီးသေးဘဲရှိရာ မညွန့်သက်သာရာရအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ သူမဝင်ရောက် ကူညီပေးရသေးသည်။ “မမ ညွန့် စောက်ပတ်ကျိန်းရင် ပြော မိစူး လုပ်ပေးမယ် ” မညွန့်လည်း အမှန်တကယ် သာမန်လူလိုးတာမျိုးမဟုတ်၍ စောက်ပတ်ပူကျိန်းလာသည့်အလျောက် ခဏအနားယူချင်ကြောင်း မိစူးကို ပြောဆိုလေရာ ရမ်ဘို့ကို လီစချွတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး သုမကိုတိုင်ခွေးလီးကို ကုန်းစုပ်ပေးနေပါသည်။ ဂဒူးနှင့်မညွန့်လည်း သူမလုပ်သမျှ မတွေ့မမြင်ဖူးသလို စူးစိုက်ကြည့်နေကြပါသည်။ ရမ်ဘိုတစ်ချီပြီးအောင်ဆွ၍ ခွေးလဒစ်မှ သုက်ရည်တွေကို သူမလက်နှင့်ဂွင်းရိုက်ကာ ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးမှ မညွန့်နှင့် ထပ်မံစခန်းသွား စေပါသည်။ ရမ်ဘိုကို မညွန့်အပေါ်ကနေ ပက်လက်လှေကြီးထိုးပုံစံ လူလိုးသကဲ့သို့ လိုးစေလိုက်သည်။ ခွေးကြီးလည်း မိစူးအမိန့်ကို အသေအချာနာခံ၍သာ တော်သေးတော့သည်။ မိစူးက လိုးဟု ဆိုမှလိုးသည်။ တော်ပြီဟူ၍ သူမအချက်ပေးမှ အလိုးရပ်သည်။ သူမက ရပ်တော့ဟု အမိန့်မပေးမချင်း လုံးဝရပ်နားခြင်းမရှိဘဲ သက်လုံကောင်းကောင်းနှင့်ဆက်လိုးမြဲသာဖြစ်သည်။ သူက လူမဟုတ်သည့် အိပ်စား ကာမ ဒီအသိသာသိသည့် အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော ခွေးစင်စစ်ပေကိုး။ ဂဒူးတစ်ယောက် ဒီအဖြစ်ကို အသေအချာကြည့်ရင်း သဘောအကျကြီးကျလျက်သာ ရှိနေပေတော့သည်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း မမဟန်နီ ပဲခူးမှ ပြန်ရောက်လာမည်။ သူမ ပြန်ရောက်မလာမချင်းတော့ မိစူးရယ်ဂဒူးရယ် မညွန့်ရယ် ရမ်ဘိုဆိုသောခွေးကြီးရယ် … ဒီလေးဦးသာ အလှည့်ကျ စခန်းသွားရပေဦးတော့မည်။ ပြီးပါပြီ။
မရတော့ဘူး လိုး လိုးပေးတော့ ” “ဖငျလား စောကျပတျလား ” “ကွိုကျတာလိုး နှဈခုစလုံးလိုး ” ဂဒူး တဈယောကျတညျးမလိုးဘဲ မောငျသောငျးကို အသာလကျယပျခေါျလိုကျသညျ။ နှဈပငျလိုးရတာကို သူတို့နှဈယောကျစလုံး စိတျဝငျစားသူတှဖွေဈ၍ မောငျသောငျးလညျးမဆိုငျးမတှပငျ ထိုငျရာကနေ ခကြျခငြျး ငေါကျကနဲ ထလာသညျ။ “ငါ့လီးမတောငျသေးဘူး မိစူး မှုတျပေး ” “လာ ကိုသောငျး ဦးဂဒူးဟာကွီးကတော့ မှုတျစရာတောငျမလိုဘူးထငျတယျ ဟငျး ဟငျး ” တကယျတမျးကတြော့ မိစူး နှဈယောကျစလုံး၏လီးတှကေို လကျတဈဖကျစီကိုငျပွီးစုပျပေးသညျ။ မောငျသောငျးလီးထကျ ဂဒူးလီးပိုကွီးသညျ။ ရှညျလညျးရှညျသညျ။ လိုးသည့ျနရောမှာတော့ မောငျသောငျးက ပိုကွာကွာလိုးနိုငျသလို ဂဒူးကအမှုတျသနျသူဖွဈ၍ နှစိယောကျစလုံးကို သူမဘယျလိုမှ လကျမလှှတျနိုငျတာ သခြောလှပါသညျ။ လီးကိုတဈလှည့ျစီစုပျ၍ လဒဈထိပျခေါငျးကိုရော ဂှေးဥနှဈလုံးကိုပါ စိတျရှညျလကျရှညျ စုပျငုံယကျဆှ၍ ပေးလိုကျရာ နှဈယောကျလုံး လိုးရနျအသင့ျဖွဈလာသညျ။
လီးတောငျလာကွပွီမို့ နှဈယောကျသား နရောယူလိုကျကွရငျး မောငျသောငျးက ကုတငျပေါျမှာ ပကျလကျအိပျကာ သူ၏မိုးပေါျထောငျ၍နသေော လီးပေါျကို မိစူးကတကျခှထိုငျလိုကျပွီး သူမစောကျပတျထဲကို လဒဈကွီး ဝငျအောငျသှငျးလိုကျကာ ဂဒူးက သူမဖငျသားအိအိနှဈဖကျအနောကျကနေ ဖငျစအိုထဲကို သူ့လီးမရမကထည့ျသှငျး၍ တဈယောကျနှင့ျ တဈယောကျ အပေးအယူမြှစှာဖွင့ျ အဖိအဖော့အတငျးအလြှော့လုပျပွီး အဝငျအထှကျမှနျမှနျနှင့ျ တဈယောကျဝငျတဈယောကျထှကျ လိုးပေးလိုကျကွလသေညျ။ မိစူး၏တအင့ျအင့ျညညျးသံနှင့ျအတူ တဘုတျဘုတျတဇှပျဇှပျလိုးပေးနသေော အသံဗလံမြားက သူတို့အခနျးကလေး ထဲကနေ အတိုငျးသားထှကျပေါျနပေါသညျ။ “အင့ျအင့ျ ဟင့ျ ဆောင့ျ လိုး လိုးပေး ဦးဂဒူး ဖငျကှဲအောငျလိုး လီးတဈခြောငျးလုံးဝငျအောငျလိုးနောျ ” “အေးပါ မိစူး ငါလိုးပေးမယျ ဈတျခြ နငျသာ ဟိုကောင့ျလီးကိုဝငျအောငျထည့ျလိုး နင့ျစောကျပတျ ကွပျစီးမနဘေူးလား ” “ဦး လီးက ပိုကွီးတယျ ရှညျလညျး ဒီလောကျရှညျလှတာ သိပျအားရတာပဲ အ အ လိုး လိုးပေးမွနျမွနျ ဆောင့ျဆကျတိုကျလိုး … အ ပွီး ပွီး တော့မယျ … အိ အိ အီးအင့ျ ဟင့ျဟင့ျ ” “မိစူး ငါနို့စို့ပေးမယျ နငျ နညျးနညျးထပျကုနျးလိုကျ … ကိုဂဒူး လိုးပစေ … ငါ့လီးကို အသာမြှောလိုးပေးထား ငါအောကျကနေ လီးကို ကော့လိုးပေးမယျ ရလား မိစူး လေး ” “ရ ရတယျ ကို သောငျး အ အ တအား မ မကော့နဲ့ … လီးကနှဈခြောငျးလုံး ကြှံဝငျနပေီ လြှော့ လြှော့ပါဦး အ အမေ့ သပေါပွီ နောျ အီး ဟီးးဟီးးး ” မိစူးတဈကိုယျလုံး ခြှေးသံတရှှဲရှှဲဖွဈနပွေီ။ စောကျပတျနှင့ျဖငျ တဈပွိုငျတညျးအလိုးခံရမှုက သကျသာလှသညျတော့ မဟုတျခြေ။ မောငျသောငျးလီးက ကွီးသလို ဂဒူးလီးကလညျး ကွီးသလောကျ ရှညျသောလီးဖွဈရာ မောငျသောငျးလီးကို သူမစောကျပတျထဲ သှငျးကာ ဖငျတလှိမ့ျလှိမ့ျလုပျ၍ဆောင့ျရငျး အနောကျကနေ ဂဒူးလီးကွီးက သူမဖငျထဲကိုတဈဆုံးအထိ ဝငျရောကျလိုးဆောင့ျမှုအား အံတကွိတျကွိတျနှင့ျ မကြျစိစုံမှိတျ ကုနျးခံပေးနရေလသေညျ။
မောငျသောငျးက မိစူးဖိလိုးသည့ျအတိုငျး အောကျကနေ သူ့လီးကွီးကို ကော့ဆောင့ျပေးသညျ။ သူကော့အဆောင့ျမှာ သူမစောကျပတျထဲကို လီးထိပျကွီးက အဆုံးထိ ဆောင့ျဆောင့ျဝငျပွီး သားအိမျကိုပငျ ဒုတျဒုတျဆိုပွီး ထိတိုကျမိသှားရသညျ။ ဂဒူးကလညျး အနောကျကနေ သူမဖငျစအိုပေါကျကလေးထဲကို သူ့လဒဈထိပျပွဲကွီး သှငျးပွီး အကှဲအပွဲလိုးပေးနပေါသညျ။ တဈနာရီလောကျကွာအောငျ လိုးပဈလိုကျကွရာ မိစူး သုံးခြီတိတိပွီးသှားရလသေညျ။ သူတို့နှဈယောကျ၏ လီးထိပျမြားဆီမှလညျး လရညျတှတေဗွဈဗွဈပနျးထှကျကာ မိစူးလညျး ရမ်မကျခငြျခွငျးပွည့ျသှားရလသေညျ။ “ခဏနားဦး ဆကျတိုကျလိုးရငျ မိစူး သလေိမ့ျမယျ ” “ပြောျလား မိစူး ဖငျခံရတာဘယျလိုလဲ ” “အငျး အောင့ျတောင့ျတောင့ျနဲ့ အကငြ့ျရလာတော့လညျး ခံနိုငျသှားတယျ ဒါပမေယ့ျ ကိုသောငျးတို့နှဈယောကျက လီးတအားကွီးတယျ … အမွဲတမျး ဒီလိုလိုးရငျ မိစူး အသကျတိုဖို့ပဲရှိတယျ …ဟငျးဟငျး ဟငျး ” “ငါမေးတာ နငျပြောျလား လို့ စောကျပတျလိုး ဖငျလိုး ခံရတာကွိုကျလား ” “ကွိုကျတယျ ကွိုကျလို့လညျး ခံတာပေါ့ ဒါနဲ့ မမဟနျနီဖငျကိုရော မလိုးခငြျဘူးလား ” “ဟားး ဘယ့ျနဲ့ပွောပါလိမ့ျ သူခံခငြျအောငျ နငျပွောပေးလို့ရမလား ရရငျ ငါ ထိပျဆုံးက လိုးပေးမယျ ” မောငျသောငျးကပွောရာ မိစူး သူမစိတျကူးကို အကောငျအထညျဖောျဖို့ ကွိတျဆုံးဖွတျလိုကျလသေညျ။
တဈခုရှိတာက သူမရော မမဟနျနီပါ ခှေးကွီးရမျဘိုနှင့ျ မှနျမှနျကွီးစခနျးသှားနမှေုကိုတော့မူ သူတို့တတှေ ဘယျနညျးနှင့ျမှ သိလို့မဖွဈနိုငျပေ။ “မိစူး ပွောပေးမယျလေ မယုံရငျစောင့ျကွည့ျကွပေါ့ ” “မိစူး ငါတဈခုမေးမယျ ” “မေး ဘာမေးမလဲ ” “နငျနဲ့ နင့ျမမဟနျနီ တဈခါမှစောကျပတျမပှတျကွဘူးလား မှနျမှနျပွောနောျ ” ဂဒူးက မေးခွငျးဖွဈသညျ။ မိစူး ခိကနဲ ရယျလိုကျပွီး … “ပှတျတယျ တဈခါတဈလပေေါ့ တဈခါတဈခါကရြငျလညျး လေးငါးညဆကျသှားတာပဲ ” “ဘယျအခနျးမှာလဲ အပေါျထပျမှာလား ” “နေဦး အဆငျပွရေငျ ကြှနျမပွောမှာပေါ့ ကဲ တောျပွီ ရှငျတို့စကားခညြျးပဲပွောနရေငျ မိစူးပွနျမယျ ” သုံးယောကျသား တဈယောကျအရကျသုံးလေးခှကျစီ သောကျပွီး လုပျငနျးပွနျစကွသညျ။ မိစူး ပွနျလာခြိနျမှာ ည၁၁ နာရီထိုးပွီ။ . အိမျကွီးပေါျရောကျတော့ ထမငျးခကြျမညှန့ျတဈယောကျ မီးဖိုမှာ သရကျသီးသနပျအိုးတငျကာ နှပျထားရငျး နဘေးရှိ ခုံတနျးရှညျတဈလုံးပေါျမှာ အညောငျးဆန့ျရာက တခူးခူးနှင့ျအိပျမောကနြတောတှေ့ရသညျ။ မညှန့ျထမီစလေးပွကေနြေ၍ ပေါငျတနျဖွူဖွူဖှေးဖှေးကွီးတဈဖကျက မဖုံးနိုငျမဖိနိုငျပေါျထှကျနလေသေညျ။ မညှန့ျလညျး သကျလတျပိုငျးအရှယျ ရောကျပမေယ့ျ မပကြျစီးသေးလို့ ဆိုရမညျ။ မောငျသောငျးကဲ့သို့ ကားဒရိုငျဘာတဈယောကျနှင့ျ အကွောငျးပါပွီး စားဝတျနရေေးအရ သူဋ်ဌေးအိမျမှာထမငျးခကြျလုပျနရေပမေယ့ျ လုံးကွီးပေါကျလှဟုဆိုရမည့ျ မိနျးမတဈယောကျဖွဈကာ သူမရုပျရညျက ပွငျဆငျလိုကျမညျဆိုလြှငျ ကွည့ျပြောျရှုပြောျရှိမည့ျ မိနျးမခြောမိနျးမခန့ျ စာရငျးဝငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပသေညျ။ မိစူး သူ့ကို မနှိုးတော့ဘဲ အိုးကို မီးဖိုပေါျကနခေကြာ လြှပျစဈမီးဖိုခလုတျကို ပိတျပေးလိုကျသညျ။
ညနစောစားပွီးဖွဈပမေယ့ျ ကနြျနသေည့ျ ဟငျးကနြျထမငျးကနြျကိုနယျဖတျပွီး ညဉ့ျလယျစာအနနှေင့ျ အဆာပွရေုံ စားသောကျလိုကျသညျ။ မညှန့ျက စညျးစနဈကွီးသူပီပီ မနကျဖွနျအတှကျကို လိုအပျတာမရှိအောငျ စီမံခကြျပွုတျပွီး သူ့နရောနှင့ျသူ စနဈတကဖြုံးအုပျထားတာ တှေ့ရသညျ။ မနကျဖွနျ အားလပျခှင့ျရဦးတော့မညျ။ မမဟနျနီ ခရီးထှကျပွီဆိုလြှငျ သူမရယျ ရမျဘိုရယျသာ အိမျကွီးမှာကနြျခဲ့ကွမညျ။ မညှန့ျလညျး လငျဖွဈသူအနားကပျပွီး တဈနကေုနျ ကဲကွသဲကွမညျမှာဧကနျမို့ သူမအနနှေင့ျ အခှင့ျကောငျးကို သခြောပေါကျ ရရှိမညျလညျးဖွဈပသေညျ။ အပေါျထပျက အခွအေနသေိခငြျ၍ ခွသေံမကွားအောငျ တိတျတိတျကလေးလှမျးတကျလာခဲ့သညျ။ မမဟနျနီ အခနျးတံခါးကစေ့ထားသညျ။ ရမျဘိုရှိမညျတော့မဟုတျခြေ။ တဈနေ့က သူမမိတျဆှတေဈယောကျ၏ ခှေးမ တဈနှဈနှဈလသမီးလေး ဟိလာ (ရာသီလာ)၍ မမဟနျနီထံအကူအညီတောငျးရာမှ ရမျဘိုအား လှှတျပေးခဲ့ရသညျ။ ပထမအကွိမျ ပွီး၍ ဒုတိယဟိဖွဈကာ ကာလအားဖွင့ျ ၁၁ ရကျရှိပွီမို့ ရကျသင့ျပွီး (အဈမတှေ ရှပိုးထိုးခြိနျမှာ ၁၂ရကျ ၁၃ ရကျအထိရှိပွီး မြိုးစပျဖို့သင့ျတောျသောရကျမှာ ၁၁ ရကျမွောကျနေ့ ဖွဈသညျ။ စကားခပြျ) လှောငျအိမျထဲထည့ျထားခဲ့ရကာ ရမျဘိုနှင့ျမပေးစားခငြျဘဲ ပေးစားခဲ့ရပွီး အားရှိသော ဆေးဝါးနှင့ျအစားအစာမြား ကြှေးမှေး၍ သူ့ကို အနားပေးထားရလသေညျ။ ရမျဘိုက သူမတို့ဆရာတပည့ျနှဈယောကျအတှကျသာမက ခှေးရှငျတှအေတှကျလညျး မကြျနှာပနျး အလှနျပှင့ျလှသည့ျ အောငျမွငျသော သားစပျခှေးထီးတဈကောငျပငျဖွဈပသေညျ။ မမဟနျနီ ကုတငျထကျမှာ တရှူးရှူးနှင့ျအိပျပြောျနပေုံရသညျ။
ညဝတျဂါဝနျလေးမှာ ပေါငျရငျးအထိ လနျတကျနပွေီး အမှေှးဘုတျသိုကျနှင့ျပိပိကလေးပါ အတိုငျးသားပေါျထှကျနတော တှေ့ရသညျ။ တံခါးကို အသံမကွားအောငျဖှင့ျလိုကျပမေယ့ျ ကလဈကနဲ မွညျသံက မမကို အမှတျမထငျ လန့ျနိုးသှားစသေညျ။ မမဟနျနီခေါငျးထောငျထလာပွီး … “လာစမျး မိစူး ငါ စောင့ျနတော ဘယျကတညျးက မှတျလဲ ” မိစူး သူမအနားလြှောကျလာပွီး ကုတငျပေါျတကျလိုကျပါသညျ။ ဆရာတပည့ျနှဈယောကျ၏ခန်ဓာကိုယျနှဈခုက ပူးပူးကပျကပျဖွဈသှားကွလသေညျ။ မမဟနျနီ တဈရေးနိုးခြိနျကမြှ ဇှတျကွမျးနသေညျ။ “အိုးးး ဘာကွီးလဲ မမ ” “ငါ နင့ျအတှကျ သီးသန့ျ ရှေးယူလာတာ လေ ဘယ့ျနှယျလဲ မိစူး ” “အဟင့ျ ဟင့ျ အဲ အဲဒါကွီး နညျးတာကွီးမဟုတျဘူး ဖွဈဖွဈပါ့မလား မမ ရဲ့” “နငျ မဖွဈစရာ ဘာရှိလဲ ရမျဘိုနဲ့တောငျ အခြိနျမှနျ လိုးသေးတဲ့ဥစ်စာ ဟငျးဟငျး ဟငျး ” တကယျတော့ ဒီဟာကွီး အသုံးပွုပွီး သူမနှင့ျ မညှန့ျ ညဉ့ျဦးယံတဈခြိနျလုံး စခနျးသှားခဲ့ကွပွီးပွီ။ ဟနျနီမောမောနှင့ျ တဈရေးတဈမော အိပျပြောျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ လငျဖွဈသူဖုနျးဆကျလာ၍ ပဲခူးရှိ ပှဲရုံလုပျငနျးကို သှားရောကျစဈဆေးကွည့ျရှုရငျးး အပွနျမှာ သူမ၏ ကြောငျးနဖေကျဖွဈသော မိတျဆှရေငျးတဈယောကျ၏ မောငျဖွဈသူ လကျထပျပှဲအတှကျ ပွငျဆငျစရာရှိတာတှကေို ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ဝိုငျးကူပွငျဆငျပေးရမညျဖွဈ၍ တဈညအိပျနှဈညအိပျ ပဲခူးမှာ သောငျတငျဦးမညျဖွဈသညျ။ မိစူးကိုလညျး အိမျအတှကျမှာကွားစရာရှိတာတှကေို အသအေခြာ ပွောဆိုမှာကွားရငျး နှဈယောကျသားအခစြျပလူးနကွေကာ ညနကေတညျးက သူမဆောငျထားခဲ့သည့ျ ယောကျြားလိငျတနျဆာ အတုခြောငျးကွီးက အသုံးဝငျနခေဲ့သညျ။
တဈယောကျတဈလှည့ျ အပွနျအလှနျ အသုံးပွုပွီး တဈညတာပြောျပါးမှုဖှရှောရငျး မနကျလေးနာရီလောကျမှ နှဈယောကျသားလကျပနျးကကြာ ဖလကျပွသှားကွလသေညျ။ နှဈယောကျအခစြျ အိမျအတှကျစြေးဝယျပွီးအပွနျမှာ မိစူးတဈယောကျ မသငျ်ကာစရာ တဈစုံတဈခုကို တှေ့မွငျလိုကျရသညျ။ ခါတိုငျး စြေးသှားလြှငျ မညှန့ျနှင့ျသူမ တဈလှည့ျစီ သှားတတျပမေယ့ျ ခုရကျပိုငျး မညှန့ျက သူမ နထေိုငျမကောငျးလို့ ဆိုပွီး မိစူးကိုသာ ဝယျခွမျးရမည့ျ ဟငျးရံအမညျပွောပွီး စြေးလှှတျလေ့ရှိသညျ။ မိစူးက အပွငျထှကျလြှငျဘယျတော့မှ ဖွောင့ျဖွောင့ျမပွနျတတျ။ ဟိုဝငျဒီဝငျ အသိသူငယျခငြျးတှနှေင့ျ တောငျတောငျအီအီ စကားပွောဆို၍ တဈခုခုစားသောကျပွီးမှ အေးအေးဆေးဆေး အိမျပွနျလာလေ့ရှိသညျ။ မမဟနျနီကိုလညျး ကွောကျရမည့ျသူမဟုတျ၍ သူမအနနှေင့ျ ထငျရာစိုငျးနနေိုငျသညျ။ ဒီနေ့လညျး အပွငျမှာ မသေူနှင့ျတှေ့၍ သူခေါျတာနှင့ျနှဈယောကျအတူ မုန့ျဟငျးခါးဝငျစားပွီး မညှန့ျအတှကျပါ ပဲသှေးနှင့ျတဈပှဲ ပါဆယျမှာယူလိုကျကာ မသေူကိုနှုတျဆကျ၍ပွနျလာခဲ့ပါသညျ။ အိမျရောကျတော့ …သူမအိပျခနျးထဲမှ အသံဗလံမြားကွားရ၍ ခွသေံမကွားအောငျ တိတျတိတျကလေးသှားပွီး ခြောငျးကွည့ျလိုကျမိသညျ။ မထငျမှတျဘဲ အခနျးတှငျးရှိမွငျကှငျးကို မွငျတှေ့လိုကျရ၍ မိစူးလညျး အတောျကလေးအံ့သွသှားမိလသေညျ။ အခနျးထဲမှာ သူမအိပျသောကုတငျထကျမှာ အဝတျအစားမလုံမလဲနှင့ျ ဖွဈခငြျတိုငျးဖွဈကာ အခစြျနယျလှနျ၍ နကွေသော မာလီဂဒူးနှင့ျမညှန့ျကို မမြှောျလင့ျဘဲ ပကျပငျးမွငျလိုကျရ၍ အံ့အားသင့ျသှားရလသေညျ။ မညှန့ျက ကုတငျပေါျမှာ ပကျလကျကားယားလဲလြောငျးလကြျရှိပွီး ဂဒူးက သူမအပေါျစီးကနေ မညှန့ျပေါငျနှဈဖကျကို သူ့ပုခုံးထကျမှာ တငျထမျး၍ အပီအပွငျလိုးနလေသေညျ။ “အ အ အိ အိ အင့ျ ကို ကို ဂဒူး အ ဖွေးဖွေး လီးကွီးက ရှညျလှနျးလိုကျတာ သားအိမျဆောင့ျနပွေီ နညျးနညျးလြှော့ လြှော့ပါ ဦး အား အင့ျ အင့ျ ” မညှန့ျ ညညျးသံကွီးက ကယြျလောငျစှာထှကျပေါျလာသညျ။
သူမညညျးညူနသေည့ျကွားကပငျ ဂဒူးလီးကွီးက အရျှိနျခပျပွငျးပွငျး ဝငျလိုကျထှကျလိုကျဖွဈနလေရော ဇှပျဖတျ ဇှတျဖတျ ဘုတျဗှပျဆိုသောအသံမြားက အားရစရာပငျ ထှကျပေါျနပေတေော့သညျ။ မိစူးပွုံးလိုကျပွီး ပစ်စညျးတှေ နရောခလြိုကျကာ အခနျးတံခါးဖှင့ျပွီး ခပျတညျတညျနှင့ျဝငျခသြှားလိုကျသညျ။ “အို့ အင့ျ အင့ျ ဟငျ … မိ … မိ စူး … ငါ ငါ အို … ” “ဘာမှ အို မနနေဲ့ အဈမကွီး ရဲ့ ဟငျး … ကိုသောငျးပွနျလာရငျ ဒီကိစ်စအသအေခြာရှငျးရမှာပဲ ဟငျး ဟငျး ” “ဟယျ မ မလုပျပါနဲ့ မိစူး ငါ ငါ ရှဈကွီးခိုးပါရဲ့ ဟယျ တ တကယျ ပွောတာ ငါတောငျးပနျပါတယျ ” “အိုးး ကြှနျမက ဒီလိုနမေယျ ထငျလို့လား ဟငျး သူမြားအိပျယာပေါျမှာလညျး လိုးခငြျတိုငျး လိုးနကွေသေး သူတို့ကမြား … ” “မိစူး မိစူး နငျ နငျ ဒီ ဒီလို မ မလုပျပါနဲ့ အ အမေ့ သခေငြျးဆိုးကွီး အသလေိုးရသလား ဟင့ျ အိအင့ျအင့ျ ” မညှန့ျ စကားတောငျဖွောင့ျဖွောင့ျ မပွောနိုငျရှာပေ။ ဂဒူးက သူမပေါငျနှဈဖကျဖွဲကားပွီး အသလေိုးခနြကော အရှိနျကောငျးနတေုနျးဖွဈသညျ။ လီးကို ကော့၍ကော့၍ တဈခကြျခငြျးလိုးနရော သူမစောကျပတျတဈခုလုံးပငျ ပွဲပွဲလနျမလိုတောငျထငျရပသေညျ။ မညှန့ျ မကြျနှာ အကွီးအကယြျ ပကြျနစေဉျမှာပငျ မိစူးလညျး သူမကိုယျပေါျမှ အကငြျ် ီနှင့ျထမီကို ကုတငျအောကျကွမျးပွငျပေါျ ခြှတျပုံခလြိုကျရာက သူတို့နှဈယောကျရှိရာ ကုတငျပေါျကိုတကျလာခဲ့လိုကျသညျ။ “ဦးဂဒူး မွနျမွနျလိုး မိစူး ဒီအတိုငျး ကွည့ျမနနေိုငျဘူး ” “အေးပါ ငါ ပွီးတော့မှာပါ …နငျသာ အသင့ျစောင့ျနေ ” မိစူး မညှန့ျမကြျနှာအနားကပျ၍ သူမနှုတျခမျးကို နမျးလိုကျသညျ။ . မညှန့ျတအံ့တသွဖွဈမိပမေယ့ျ ကွောငျအမျးအမျးတော့ဖွဈမနပေါ။ သူမအနနှေင့ျ မိစူးနှင့ျလငျတောျမောငျ မောငျသောငျးရော မာလီဂဒူးနှင့ျပါ စခနျးသှားဖူးသည့ျအဖွဈကို သူမကိုယျတိုငျကိုယျကြ ခြောငျးမွောငျးကွည့ျရှု ခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ မဟုတျပါလား။ မညှန့ျ မိစူးကို ပွနျနမျးသညျ။ မိစူးလကျက သူမနို့အုံကွီးနှဈမွှှာဆီ ရောကျရှိသှားပွီး အပီကိုငျကာ နယျပေးလိုကျသညျ။ မညှန့ျကလညျး သူမကိုပွနျဖကျ၍ နှဈယောကျသား နို့ကိုငျဖငျကိုငျ ဟိုကိုငျဒီနယျ ပွုနကွေရာ ဂဒူးလညျး အားတကျလာပွီး မညှန့ျပေါငျတနျနှဈဖကျကို ဆှဲဖွဲ၍ အဆကျမပွတျ တဘုတျဘုတျ တဘတျဘတျနှင့ျ ဇယျဆကျသလို လိုးဆောင့ျခလြတေော့ရာ တဖွညျးဖွညျး အရှိနျပိုတကျပိုမွနျလာခဲ့ပွီး သူ့ခါးကို တဆတျဆတျကော့ထိုး၍ လီးထိပျမှ ပစြျခြှဲခြှဲလရညျမြားကို မညှန့ျစောကျဖုတျထဲသို့ တဗွှတျဗွှတျပငျ ရကေုနျရခေမျး ပနျးထုတျပဈလိုကျလတေော့၏။ မိစူးနှင့ျမညှန့ျ ဂဒူးလီးကို နှဈယောကျသားအလုအယကျနမျးစုပျကာ လရညျနှင့ျစောကျရညျမြားပွောငျစငျအောငျ ယကျပေးလိုကျကွသညျ။
ဂှေးဥနှဈလုံးပါမကနြျအောငျ ယကျပေးခွငျးဖွဈသညျ။ ဂဒူးလီးကွီးမှာ အမှုတျသနျသည့ျ မိနျးမသားနှဈယောကျ၏ တံတှေးရညျမြားဖွင့ျ တောကျပွောငျစိုလကျကာ တှဲလောငျးကွီးကလြကြျ ရှိနလေတေော့သညျ။ မညှန့ျစောကျပတျကို တဈခြီလိုးပွီးသှားသော သူ့လဒဈထိပျခေါငျးကွီးမှာ အပွူးသားဖွဈနပေသေညျ။ “မိစူး လာ နင့ျစောကျပတျ ငါမှုတျပေးမယျ ” ဂဒူးပွောလိုကျရာ … “ဟင့ျအငျး မမှုတျနဲ့ဦး … အဈမညှန့ျစောကျပတျ အရငျမှုတျပေးလိုကျ” ဂဒူးလညျး သူမအမိန့ျကို နာခံပွီး မညှန့ျပေါငျနှဈဖကျကိုဆှဲဖွဲ၍ ပေါငျကွားထဲရှိစောကျပတျကို အားပါးတရမှုတျပေးလိုကျသညျ။ မညှန့ျလညျး သူမခွထေောကျနှဈဖကျကို ကကြနြနဖွဲကား၍ ဂဒူးက သူမစောကျပတျတဈဝိုကျကို အားရပါးရ လြှာနှင့ျယကျ ပါးစပျနှင့ျစုပျနမျးပေးတာကို ဖပြျဖပြျလူးမြှ ကော့ခံနရေငျးက မိစူးကိုလကျယပျခေါျပွီး သူမမကြျနှာပေါျမှာ မိစူးကို ထိုငျခစြလေိုကျပါသညျ။ မိစူး၏ ပွဲအာအာကလေး ဖွဈနသေော စောကျပတျကို အောကျကနေ သူမ လြှာသှငျးပွီး အပီအပွငျ နမျးလိုကျစုပျလိုကျနှင့ျပွနျလညျ ယကျသပျ ဆှနှူးပေးလိုကျလသေညျ။ သုံးယောကျသား အပေးအယူမြှကာ အတောျကလေးဟနျကနြကွေပွီး မညှန့ျရောမိစူးပါ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဆှလိုကျနှူးလိုကျ ဂဒူးကဂြာပေးလိုကျနှင့ျရမ်မကျအမှောငျဖုံးကာ စောကျပတျတရှရှဖွဈပွီး အရှကျကုနျလာခဲ့ရလပွေီ။ မိစူးရောမညှန့ျပါ စောကျရညျတရှှဲရှှဲဖွဈလာပွီး အနရေခကျလာကွသညျ။ တောငျမတျနပွေီဖွဈသော ဂဒူးလီးကို တဈယောကျကစုပျလိုကျ ကနြျတဈယောကျက စောကျပတျအယကျခံလိုကျနှင့ျ နှဈခြီစီလောကျ စောကျရညျပနျးထှကျကာ ကိစ်စပွီးသှားကွသညျ။ ဂဒူး ပထမစလိုးသူက မိစူးဖွဈသညျ။
မိစူးကို သူလိုး၍မဝသေးပါ။ သူမကိုဖငျကုနျးခိုငျးပွီး အနောကျကနေ ပွူးထှကျနသေော သူမစောကျပတျကို ကုနျးလိုးသညျ။ စောကျပတျလိုးပွီး နောကျတဈခြီ ဖငျလိုးသညျ။ မညှန့ျလညျး မိစူးကိုယျတိုငျဖငျခံမှုကိုမွငျရသဖွင့ျ ကာမစိတျမြား တအားထကွှလာလသေညျ။ သူမအလှည့ျမှာ ဂဒူးဖငျလိုးခှင့ျတောငျးရာ အသာတကွညျပငျ ခှင့ျပွုလိုကျသညျ။ မောငျသောငျး တဈခါတဈလေ စိတျပေါကျပေါကျနှင့ျ ဖငျလိုးမှုကိုခံဖူးပွီး ဖငျထဲ လီးသှငျးကငြ့ျရှိနေ၍လညျး သူမအဖို့ ယခုကဲ့သို့ ဂဒူးအလိုကို လှယျလှယျနှင့ျလိုကျလြော ပေးနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ မမဟနျနီနှင့ျအတူ မညှန့ျယောကျြားဖွဈသော ဒရိုငျဘာမောငျသောငျးပါ တဈပါတညျး လိုကျပါသှားခဲ့တာကွောင့ျ သူတို့သုံးယောကျ ဘာအနှောင့ျအယှကျ တဈစုံတဈရာမှ မရှိဘဲ အိမျမှာပဲတဈနကေုနျနရေငျး ဂဒူးက သူမတို့နှဈယောကျကို တဈယောကျစီ ပတျလညျရိုကျကာ လိုးပွီးရငျးလိုးနလေတေော့၏။ စောကျပတျရော ဖငျပါ လရညျအလိမျးလိမျး ပပှေနအေောငျအလိုးခံပွီး နှဈယောကျသား ကောငျးစှာ အနားယူလိုကျကွပါသညျ။ ညနဖေကျ ရမျဘိုကိုအစာကြှေးပွီး မိစူး သူ့ကို အပေါျထပျရှိ မမဟနျနီအိပျခနျးထဲ ခေါျသှငျးလာသညျ။ . “မိစူး ဘယျရောကျသှားလဲ အညှန့ျ ” “ခှေးစာကြှေးနတေယျထငျတယျ ဘာလုပျဖို့လဲ သူ့ကိုခေါျခငြျလို့လား” ဂဒူးရောကျလာပွီး မေးလိုကျခွငျးဖွဈ၍ မညှန့ျလညျး မရမေရာဖွလေိုကျရသညျ။
ဂဒူး သူမကို အိပျခနျးထဲအထိ ဆှဲခေါျလာသညျ။ နေ့ခငျးက သူမတို့နှဈယောကျကို တဈခြိနျလုံး လိုးခဲ့တာတောငျ ဂဒူးက အားမရနိုငျသေး။ သူမကို တဈခြီ အရငျဆှဲဖို့ပွငျနသေညျ။ “မခေါျနဲ့ဦး နင့ျနဲ့ငါ အရငျဆောျကွမယျ ပွီးမှ သူ့ကို လိုကျရှာတာပေါ့ ဧကန်တ ခှေးနဲ့လိုးနတောလား မသိဘူး ” ဂဒူးပွောလိုကျရာ မညှန့ျက သူ့ရငျဘတျကို ဘုနျးကနဲထုလိုကျပွီး … “ရှငျကလဲ ကလေးကို မဟုတျကဟုတျက ပွောတော့မယျ လိုးစရာလား လိုးခငြျးလိုး ရှငျနဲ့မောငျသောငျးပဲ ဖငျနဲ့စောကျပတျလိုးကွမှာ ” “ဟငျး ဟငျး ကလေး မဟုတျဘူး အညှန့ျရဲ့ နငျမယုံရငျ စောင့ျသာကွည့ျ ” ဂဒူးပွောပွီး လုပျငနျးစလိုကျသညျ။ မညှန့ျကိုယျပေါျကအဝတျတှေ ကွမျးပွငျထကျသို့ လြှောကနဲ ကြှတျပုံကြ သှားခဲ့လပွေီ။ ရမျဘို့ဖူးစာ မညှန့ျနှင့ျဂဒူး အပေါျထပျရှိ ဟနျနီ့ အိပျခနျးဖကျဆီ တကျလာသညျနှင့ျ အသံဗလံမြားကို စကွားရလပွေီ။ ဂဒူး သူမကို လှည့ျကွည့ျပွီး ရှူး တိုးတိုး ဟု ပါးစပျမှာ လကျညှိုးကပျ၍ အခကြျပေးလိုကျသညျ။ နှဈယောကျသား အိပျခနျးဝအထိ လြှောကျလာကာ တံခါးကို အသာဆှဲဟ၍ ခြောငျးကွည့ျလိုကျကွပါသညျ။ “အိ အင့ျ အအ ရ မျ ရမျဘို ဖွေး ဖွေး လိုး စမျး အ အကြှတျ ကြှတျ နာတယျ ငါလိုးကလေးရဲ့ နင့ျလဒဈကွီးနဲ့ လိုးရငျ … သပွေီပေါ့ အ အ ဆောင့ျဆောင့ျကှာ ဒီလောကျဖွဈလှတာ လိုး လိုးစမျး စောကျပတျကှဲအောငျလိုး ဖငျတော့မလိုးနဲ့ ကွားလား ” ရမျဘို သူမ၏ကုနျးကုနျးကှကှလုပျထားသော ဖငျသားအိအိနှဈဖကျ အနောကျကနေ သူမစောကျပတျကို ခှေးလိုးလိုးလကြျရှိသညျ။ မညှန့ျ ကိုယ့ျမကြျစိတောငျကိုယျမယုံနိုငျဘဲ ဖွဈမိလသေညျ။ “ဟယျ အံ့ပါ့တောျ မိစူးတော့ လုပျခလြိုကျပွီ ” “ခှေးလီးက ကွီးတယျ နငျရော အလိုးမခံခငြျဘူးလား ” “အိုးး မခံပါဘူး ကွကျသီးထခငြျစရာကွီး … ဟီး ဟီးးး ” “နငျ ခှေးလြှာနဲ့ယကျတာ ခံခငြျမှာပေါ့ လာ အထဲဝငျမယျ ” “ဖွဈ ဖွဈမလား ကောငျမလေး ရှကျနမှောပေါ့ ” “သူမရှကျလို့ ခှေးလိုး လိုးတာ မမွငျဘူးလား ” ဂဒူး သူမလကျကို ဆှဲကာ အခနျးထဲဝငျလိုကျသညျ။
မိစူးက ကောငျးခနျးရောကျနပွေီ။ သူတို့ဝငျလာတာကိုတောငျ သတိမထားမိနိုငျတော့။ ဒီအခြိနျ အခနျးထဲမှာ အခြိနျကိုကျဗုံးတဈလုံး လာဖောကျခှဲလြှငျတောငျမှ ထှကျပွေးဖို့ရာ စဉျးစားမိမှာမဟုတျတော့ပါ။ သူမဖငျနှဈဖကျကို ဖငျဘူးတောငျးထောငျမတတျ ခှကျနအေောငျ ကုနျးထောငျပေးထားရငျး ခှေးကွီးရမျဘို၏ သဲကွီးမဲကွီး တဇပျဇပျလိုးဆောင့ျမှုကို အံတကွိတျကွိတျနှင့ျကုနျးခံနပေသေညျ။ သူမစောကျရညျလညျး အထှကျကွမျးနပွေီး နှဈခြီသုံးခြီမက လေးခြီလောကျအထိ စောကျရညျမြားပနျးထှကျကာ ဆကျတိုကျပွီး နခေဲ့ရပွီ။ စောကျရညျတှကေ သူမပေါငျခွံတဈဝိုကျမှာသာမက တကောင့ျခှကျနားအထိ ရောကျအောငျ ယိုစီးးကနြခေဲ့ရသညျ။ ဂဒူးလညျး မညှန့ျ အကငြျ် ီနှင့ျထမီကို ဆှဲခြှတျပွီး သူမတဈကိုယျလုံးကို စိတျကွိုကျနယျ၍နပွေီ။ မိစူးနှင့ျခှေးကွီးလိုးတာ ကွည့ျကောငျးကောငျးနှင့ျကွည့ျပွီး သူ့လီးကွီး အပွတျပငျတောငျလာရသညျ။ မညှန့ျကိုယျတိုငျလညျး ဘာဖွဈလို့ ဖွဈမှနျးမသိ အလိုလိုနရေငျး ဟော့ခငြျလာသညျ။ ဂဒူးလခြောငျးကွီးကို လကျနောကျပွနျကိုငျပွီး ဂှငျးရိုကျပေးနမေိကာ နှဈယောကျသားအလုပျဖွဈနကွေလသေညျ။ မိစူး သတိဝငျလာကာ ခှေးကွီးအား လီးခြှတျစလေိုကျရာက ကိုယျကို တဈပတျလှည့ျ၍ ပကျလကျ ဒူးထောငျပေါငျကားလုပျရငျး ရမျဘို၏ဦးခေါငျးကို သူမပေါငျကွားထဲသို့ ဆှဲထည့ျပေးလိုကျလသေညျ။
ရမျဘိုလညျး စောစောက သူလိုးပွီးသှားသည့ျ မိစူးစောကျပတျကို အမွတျတနိုးပငျ သူ့လြှာပွားကွီးဖွင့ျ တပွပျပွပျ ယကျသပျပေးနလေပွေီ။ “ဟငျ ဦး ဦး ဂဒူး … မ မ … ညှန့ျ … အို … ” “မိ မိစူး အ အ … နငျ နငျ စိတျ စိတျမဆိုး နဲ့ နောျ … ဟင့ျ ဟင့ျ အ အင့ျ အငျးးး ” မိစူး အခွအေနမှေနျကိုသဘောပေါကျလိုကျသညျ။ ကုတငျပေါျကနေ ဆငျးခလြာပွီး ရမျဘိုနားနားကပျ၍ တဈစုံတဈခုကို ကပျပွောလိုကျလသေညျ။ သည့ျနောကျ … “လာ မမ ဒီပေါျလာကွ … ဘာလဲ တဈယောကျတညျး အပိုငျစီးမလို့လား ဟငျးဟငျး ဟငျး ” “မ မဟုတျပါဘူး မိစူးရယျ ” လီးတနျးလနျးနှင့ျ ဖွဈသညျ။ ဂဒူး လီးကို ပွနျခြှတျလိုကျပွီး မိနျးမနှဈယောကျအကွားဝငျ၍ ပုခုံးတဈဖကျတဈခကြျဖကျကာ ကုတငျပေါျတကျလိုကျပါသညျ။ မိစူး မညှန့ျ စောကျပတျကို မှုတျပေးသညျ။ လကျနှင့ျလညျး အပွတျနှိုကျဆှပေးသညျ။ မညှန့ျ စောကျရညျတှေ တောကျတောကျယိုစီးကခြဲ့ရပပွေီ။ “ကြှနျမ အလှည့ျနောျ မ မညှန့ျ ” “အငျး ဟိုဖကျလှည့ျ မိစူး ” မိစူး ဂဒူးလီးကို လရညျထှကျအောငျစုပျရငျး ပေါငျနှဈဖကျကို ကကြနြနဖွဲကား၍ မညှန့ျ စောကျပတျယကျပေးတာကို ကော့ခံပေးနသေညျ။ ” မမ မမ … ” ဆိုပွီး သူမခေါငျးကို ဖိနှိမျခရြငျး တငျပါးနှဈဖကျကော့ပြံကာဖွင့ျ ဆန့ျငငျထှန့ျလူးနခြေိနျမှာပငျ ရမျဘိုလညျး မိစူးအရိပျပွသလို အကောငျမွငျသည့ျ ခှေးလိမ်မာကွီးဖွဈသည့ျအတိုငျး မညှန့ျစောကျပတျကို သူမဖငျသားအိအိနှဈဖကျ အနောကျကနေ၍ လြှာပွားကွီးနှင့ျတပွပျပွပျယကျနမျး၍နတေော့သညျ။
. မညှန့ျ ခကြျကောငျးမိ၍ လန့ျဖပြျအောျလိုကျမိသညျ။ “အို အု အူးး အူးး… ဝု အု အု … အူးးးး … အူးးး ဝူးးး … ” ရမျဘိုကလညျး သူ့သခငျမနှဈယောကျအပေါျ သူပွုလုပျနကေအြတိုငျးပငျ ဟနျမပကြျ ပါးစပျမှ တဟဲဟဲ အသံပွုလကြျ မညှန့ျ၏တဏှာရညျရှှဲနဈနပွေီဖွဈသော စောကျဖုတျပွငျကွီးကို လြှာနှင့ျစိမျပွနေပွေ ယကျပေးနပေါသညျ။ မိစူးလညျး သူမကိုအလဈမပေးဘဲ ခေါငျးကို ဖစြျဆှဲ၍ ဖိနှိမျထားလရော ရမျဘိုကွီး စိတျကွိုကျလှုပျရှားခှင့ျရပွီး မညှန့ျ၏စောကျပတျနှင့ျဖငျပေါကျကို အငမျးမရ ယကျပေးနရေုံသာမကဘဲ အနောကျကပါတကျခှပွီး သူမစောကျပတျထဲကို သူ့လီးမဝငျဝငျအောငျ မရမကထည့ျသှငျး၍ လိုးဖို့ကွိုးစားနပေပွေီ။ ရမျဘို့လီးတဈခြောငျးလုံး မညှန့ျ၏လီးအဝငျလမျးပှင့ျပွီးဖွဈသော စောကျခေါငျးကလေးထဲသို့ လြှောကနဲ ထိုးဆောင့ျတိုးဝငျသှားရကာ လဒဈဘုလုံးတဈခုလုံးပငျ သူမစောကျဖုတျထဲကို မထငျမှတျဘဲ တဈဆို့ရောကျရှိသှားလသေညျ။ ရမျဘို ဇပျဇပျဇပျဇပျနှင့ျ ဖငျကို စကျသနေတျပဈသလို အဆကျမပွတျ ညှောင့ျဆောင့ျ၍နသေညျ။ သညျအဖွဈကို မိစူးရော ဂဒူးပါ သိမွငျနရေပွီး နှဈထောငျးအားရလညျး ရှိကွပသေညျ။ မိစူး သူမကိုျယျကို အောကျဖကျသို့ အနညျးငယျလြှောဆငျးပွီး မညှန့ျခါးကို တငျးတငျးကွပျကွပျပှေ့ဖကျထားလိုကျသညျ။ မကြျနှာခငြျးဆိုငျဖကျတှယျကာ အနမျးပေးရငျး သူမနို့အုံအိအိနှဈလုံးကို ဖစြျလှိမ့ျနယျ၍ နို့သီးကလေးကို ကလိကစားပေးနသေညျ။
မညှန့ျတဈယောကျ ယခုလိုမထငျမှတျဘဲ ခှေးအလိုးခံရပွီး တဈခါမှမခံစားဖူးသော အရသာကို စိတျထဲက သာယာိသလိုဖွဈလာရသညျ။ နှုတျမှလညျး အိုးအိုးအင့ျအင့ျမွညျတမျးကာ ဖငျကွီးတလှိမ့ျလှိမ့ျနှင့ျ ရမျဘို၏ညှောင့ျလိုးခွငျးကို ကော့ခံပေးလာတာ တှေ့ရလသေညျ။ ဖီလျတကျလာပုံရသညျ။ ဒီအခြိနျမှာ ဂဒူးက မိစူးကို အသာမကြျရိပျပွရငျး သူမကို နဘးအသာဖယျခိုငျးလိုကျရာက မညှန့ျပါးစပျရှေ့မှာ သူ့လီးကို တေ့လိုကျကာ လီးစုပျခိုငျးလိုကျပွနျပါသညျ။ မညှန့ျ ဘယျလိုမှ မငွငျးဆနျနိုငျတော့ပါ။ ငွငျးဆနျဖို့ရနျ စှှမျးအငျတှပေငျ ကုနျခမျးသလိုကွီးဖွဈကာ တဈဖကျက ခှေးအလိုးခံ၍ တဈဖကျကလညျး ဂဒူးလီးအားစုပျရငျး မိစူး၏ဖငျသားရငျသားမြားကို ဖစြျလှိမ့ျခြနေယျကိုငျပေးနမှေုအား တဈယညေကျတညျး အံကွိတျတငျးခံရငျး့ဖင့ျ သူမစောကျပတျက စောကျရညျတှေ အလိုလိုပငျ စီးယိုပနျးထှကျလာသည့ျအခွကေို ဆိုကျရောကျခဲ့ရလသေညျ။ “မမ အဆငျပွလေား ဟငျ ” “ပွေ ပွပေါတယျ ” “ဒါဖွင့ျ မိစူးနဲ့မမ နရောခြိနျးလိုကျရအောငျ ရမျဘိုက တအားဏှာကွီးတာ …သူမပွီးမခငြျးတဈနကေုနျ ဆကျလိုး နေဦးမှာ … မမ ခှေးလိုးခံကငြ့ျမရှိသေးတော့ ဒီလောကျနဲ့တောျပွီ … ဦးဂဒူးလညျး လီးတောငျနတောကွာပွီ ဆိုတော့ မမ နညျးနညျးလြှော့ပေးလိုကျဦး မမလိုးပွီးမှ ကြှနျမလိုးမယျ ” ခှေးလိုးမှုကို မိစူး ဆကျလကျတာဝနျယူလိုကျသညျ။ မညှန့ျနှင့ျဂဒူး တဈခြီထပျလိုးခြိနျမှာ မိစူးလာျး သူ့ခှေးနှင့ျသူ စောကျပတျအယကျခံရငျး ဖီလငျတှစှေတျတကျလာကာ ခှေးလီးကို သူမကိုယျတိုငျ ကုနျးး၍ အလိုးခံပေး နပေတေော့သညျ။ မညှန့ျနှင့ျဂဒူး တဈခြီလိုးပွီးတော့ ဂဒူးလညျး အနညျးငယျပနျးသှားပုံရတာမို့ ခတေ်တခဏအနားယူစလေိုကျပွီး သူမတို့နှဈယောကျသား အပွနျအလှနျ စဈစတီနိုငျးလုပျကာ စောကျပတျနမျးကွယကျကွ မှုတျကွ အပွနျအလှနျ လကျနှင့ျထိုးနှိုကျဆောင့ျကွနှင့ျ အလုပျမြားရငျး နောကျထပျနှဈခြီစီ ထပျပွီးသှားသညျ။
“ကဲ မမရေ ပွနျစလိုကျကွစို့ ” . မိစူး အခကြျပွလိုကျတာ့ ခှေးကွီးရမျဘိုလညျး အမွီးတနှံ့နှံ့နှင့ျနပွေီး သူမတို့နှဈယောကျစီ တိုးကပျလာကာ ပကျလကျလှနျ၍ကော့ဖွဲပေးထားကွသော အမြိုးသမီးနှဈယောကျ၏စောကျပတျမြားဆီကို ခေါငျးတိုးဝငျ၍ တဈယောကျကို တဈလှည့ျစီ လြှာနှင့ျတပွပျပွပျ လိုကျလံယကျသပျ ဆှနှူးပေးနပေတေော့၏။ မိစူး ပွီးတော့ မညှန့ျ … မညှန့ျအလှည့ျကတြော့ သူ ယခုမှတှေ့ဖူးသည့ျ စောကျပတျအသဈစကျစကျ ပမေို့လားမသိ။ ရမျဘို စောကျပတျကိုယကျလိုကျ ဖငျပေါကျထဲကို လြှာနှင့ျထိုးထိုးကလောျပွီး အပီအပွငျအရသာယူ၍ စိတျတိုငျးကြ ယကျပေးလိုကျရာ မညှန့ျလညျး တအီးအီးတအဲအဲနှင့ျဖွဈလာပွီး တဈကိုယျလုံးကော့ပြံလာရလကြျ နောကျဆုံး ရမျဘို၏ နောကျတဈကွိမျ တကျလိုးခွငျးကို ခံရပွနျလတေော့၏။ သူ အငမျးမရပငျ လိုးသညျ။ ဇယျဆကျသလို မနားစတမျး ကြုံးလိုးကြုံးဆောင့ျခွငျးဖွဈလရော မညှန့ျ လေးခြီလောကျအထိ ပွီးသှားရသညျ။ ခှေးကွီး သူမကိုလကျမလှှတျမခငြျး သူမကိုျယျတိုငျလညျး မငွီးမငွူပငျ ကုနျးလိုကျကော့လိုကျ ဆကျတိုကျပငျ အလိုးခံနတောတှေ့ရလသေညျ။ ဂဒူးက မိစူးစောကျပတျကို ခှေးကွီးနှင့ျအပွိုငျကုနျးယကျပေးလာပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ စလိုးသညျ။ တဈနာရီလောကျလိုးပွီး တဈခြီပွီးရာ မိစူးကို သူ့အပေါျတကျခိုငျးလိုကျရပွီး သူမစိတျတိုငျးးကြ ထပျမံ၍ အားပါးတရ စိတျရှိသဘောရှိ လိုးစလေိုကျပါသညျ။
မိစူးလညျး ဂဒူးအပေါျကနေ ဖငျကိုတလှိမ့ျလှိမ့ျကွိတျကာ စကောဝိုငျး မှေှ့လိုးပဈလိုကျလသေညျ။ မိစူး လိုးပွီး ခဏနားခြိနျအထိ ရမျဘိုလိုး၍မပွီးသေးဘဲရှိရာ မညှန့ျသကျသာရာရအောငျ တဈဖကျတဈလမျးကနေ သူမဝငျရောကျ ကူညီပေးရသေးသညျ။ “မမ ညှန့ျ စောကျပတျကြိနျးရငျ ပွော မိစူး လုပျပေးမယျ ” မညှန့ျလညျး အမှနျတကယျ သာမနျလူလိုးတာမြိုးမဟုတျ၍ စောကျပတျပူကြိနျးလာသည့ျအလြောကျ ခဏအနားယူခငြျကွောငျး မိစူးကို ပွောဆိုလရော ရမျဘို့ကို လီစခြှတျခိုငျးလိုကျပွီး သုမကိုျတိုငျခှေးလီးကို ကုနျးစုပျပေးနပေါသညျ။ ဂဒူးနှင့ျမညှန့ျလညျး သူမလုပျသမြှ မတှေ့မမွငျဖူးသလို စူးစိုကျကွည့ျနကွေပါသညျ။ ရမျဘိုတဈခြီပွီးအောငျဆှ၍ ခှေးလဒဈမှ သုကျရညျတှကေို သူမလကျနှင့ျဂှငျးရိုကျကာ ထုတျပေးလိုကျပွီးမှ မညှန့ျနှင့ျ ထပျမံစခနျးသှား စပေါသညျ။ ရမျဘိုကို မညှန့ျအပေါျကနေ ပကျလကျလှကွေီးထိုးပုံစံ လူလိုးသကဲ့သို့ လိုးစလေိုကျသညျ။ ခှေးကွီးလညျး မိစူးအမိန့ျကို အသအေခြာနာခံ၍သာ တောျသေးတော့သညျ။ မိစူးက လိုးဟု ဆိုမှလိုးသညျ။ တောျပွီဟူ၍ သူမအခကြျပေးမှ အလိုးရပျသညျ။ သူမက ရပျတော့ဟု အမိန့ျမပေးမခငြျး လုံးဝရပျနားခွငျးမရှိဘဲ သကျလုံကောငျးကောငျးနှင့ျဆကျလိုးမွဲသာဖွဈသညျ။ သူက လူမဟုတျသည့ျ အိပျစား ကာမ ဒီအသိသာသိသည့ျ အဟိတျတိရစ်ဆာနျဖွဈသော ခှေးစငျစဈပကေိုး။ ဂဒူးတဈယောကျ ဒီအဖွဈကို အသအေခြာကွည့ျရငျး သဘောအကကြွီးကလြကြျသာ ရှိနပေတေော့သညျ။ တဈရကျနှဈရကျအတှငျး မမဟနျနီ ပဲခူးမှ ပွနျရောကျလာမညျ။ သူမ ပွနျရောကျမလာမခငြျးတော့ မိစူးရယျဂဒူးရယျ မညှန့ျရယျ ရမျဘိုဆိုသောခှေးကွီးရယျ … ဒီလေးဦးသာ အလှည့ျကြ စခနျးသှားရပေဦးတော့မညျ။ ပွီးပါပွီ။